Tadiom-pitiavana | 12
I Mihary io. Ela tokoa izany, tamin’izy nanala bacc no nifankahitan’izy ireo farany. Niray kilasy, nitovy fahaizana, nifanjinja ary niady toerana ho voalohany hatrany tany am-pianarana.
- "Mihary! Niova be ianao, tonga soa, vao tonga izao ianao e?"
Nanatona i Mihary sady nandray ny tanan’i Hery havia:
- "Mbola tsy manambady ve i Hery?" Sady nihomehy kely izy.
Dia noraisin’i Hery koa ny an’ity vehivavy.
- "Ary ianao ka! Mbola tsy misy peratra mihitsy. Ela izany ry Mihary, tsy nampoiziko mihitsy ny hahita anao aty Mahajanga. Fa inona no anton-dianao aty?"
- "Andao aloha hiditra ato amin’ny efitranoko e!" Sady niverina teo am-baravarany izy.
Ilay mpitondra entana mbola niandry azy tao no nomeny fahafaliam-po dia lasa.
Nijoro kely teo an-tokonana I Hery, nandinika an’i Mihary no toa lasalasa saina izany.
- "Samy mivahiny isika eto, hoy i Hery, fa ianao inona no anton-dianao?"
- "Tena faly mihitsy aho ry Hery mahita anao aty, nanana tahotra be mihitsy fa vao izao aho no mandalo an’i Boina. Napetraky ny fiaran’ny minisitera fotsiny aho dia lasa indray izy nitondra olona nankany Mampikony. Saritany fotsiny izao no tokony tsy hahavery ahy eto."
- "Tsy very izany ianao ka! Izaho koa eto afaka hanampy anao."
- "Misaotra mialoha," hoy i Mihary, nametraka ny valiziny teo ambony fandriana, avy eo naka seza ary nampandroso an’i Hery.
- "Nanao ahoana aloha ianao e! firy taona izay isika tsy nifankahita! Sivy taona. Izaho tany Amerika tsy dia nahalala vaovao mikasika ny namako rehetra taty Dago fa zara raha nandalo fotsiny dia niverina tany indray. Ny toerana koa tena lavitra, tsy maintsy mandalo Paris foana rehefa mba hody, dia mievrina any indray rehefa ho any New-York. Inona izao no ataon’i Hery?"
- "Izaho ve? Tsy fantatro, inona no tianao?"
- "Andray ry Hery, mbola be vazivazy foana! Izaho nalefa nianatra tany Amerika iny dia nanao fianarana mpitsabo, vita izay dia naka fandalinana manokana momba ny fananahana sy ny fampiterahana. Ary resaka momba izay mihitsy aza no anirahana ahy aty."
- "Tsara be izany, izaho indray, ... tsy haiko ny hanambaràna azy anao.
Nifampijery izy ireo. Samy nahatsiaro ny lasa efa ho folo taona izay.
Nifampanontany an’eritreritra izay samy nanjo azy nandritra izany fotoana rehetra izany.
Sivy taona lasa, ... , samy nitana ny laharana voalohany hatrany moa, niady toerana, nifampitaha fahaizana , dia nanandrana nifankatia tamin’ny fotoana tsy nampoizina, kanjo, nandrehitra afom-pitiavana tampoka tao am-pon’ny tsirairay, dia nanandrana nanao ny fifanorohana voalohany, nitempo niaraka tamin’izay ilay fitia vao nitsiry ka avy dia nidoroboka.
Ny nahagaga dia lasa nisy nisosoka ilay laharana roa voalohany tao an-dakilasy. Dia noravàna tampoka koa ny fifankatiavan’izy ireo. Lasa nifanalàn’ny ankizy tao am-pianarana izy roa, ny esoeson-teny tsy zaka intsony. Dia naleo nisaraka tsy nisy naratra. Ilay fo nitempo fitiavana voalohany anefa na dia izany aza dia mbola nifonoka nitsilopilopy tao ihany.
Tsy nisy niteny, nitsangana i Mihary dia namaha ny valiziny, nanala ireo akanjo vitsivitsy teo imason’i Hery, nanokatra ny larimoara dia nanantona ireny tao.
I Hery kosa tsy niala any amin’i Mihary ny masony. Nandinika sy namerina taminy ny lasa rehetra niainan’izy roa. Fitiavan’ankizy, sa tanora saina loatra tamin’izany, sa fianarana no nibahana tao anatin’ny loha? Izao, tsy izany intsony fa efa manjaka tanteraka ao anaty ny fitiavana, efa lasa tsy maintsy atao indray aza izany fa tsy mety intsony. Lehibe ny tena, mitombo taona tsy toy ny tamin’ny lasa. Miha-matotra ara-batana fa ny saina indrindray no misavilivily te-hiverina amin’ny taona nahazaza.
- "Mihary an! Avelako aloha ianao hiala sasatra tsara fa vizaky ny nandeha fiara. Atsy ambadika atsy ihany aho raha miisy ilànao ahy. Tsy maninona angamba raha miara-misakafo isika sy ianao izao e? Dia entiko mankeny amoron-dranomasina avy eo hijery ny hakanton’i Mahajanga."
- "Iée! Mandondona ao aminao aho rehefa vonona, mbola mety hatory kely minitra vitsivitsy fotsiny aho dia miaraka aminao misakafo fa tsy mampaninona," hoy izy nitsiky.
Nangingina irery teo i Mihary, nampirina ny entany, nandray ny efitra fandroana sady nandinika ny lasany. Namerina tao an-tsainy ny fifanorohan’izy roa voalohany. Oroka natao ho andrana fotsiny, tsy naharitra akory nefa nampirehitra ilay afom-pitiavana niredareda ary tsy navelan’ny sasany hahazo aina dia tsy maintsy novonoina. Lasa nifanalavitra avy eo rehefa vita ny fanadinana, lavitry ny fo ve moa, tsy ho lavitry ny maso? Dia nifanadino, nefa tsy navelan’ny fotoana tsy nifankahita.
I Hery kosa, rehefa avy naka fandroana vetivety dia nandamina ny antontan-taratasy rehetra nokarakarainy ny hariva teo. Vita izay, nalefany ny fahitalavitra dia nanaraka tantaram-pitiavana izy teo am-piandrasana izay handondona teo am-baravarana.
Injay fa nihodina ilay hidin-trano, dia nojereny tsara. Iny Mihary fa niditra ny efitra. Niova akanjo ary raoby fohifohy hatreo amin’ny lohalika no nanaovany, ny moro-tongony tahaka ny felam-boninkazo manonjanonja manopy manga tanora. Ilay didin’akanjo manaraka ny toe-batany tsara. Izy rahateo, tsy dia ratsy, eny e! azo sokajiana ho tsara aza, miaraka amin’ny volony hatreo amin’ny hatoka mibokona tsara manendrika ny akanjony.
Niova i Mihary, niova ara-batana, ary ara-tsaina ihany koa. Tsy i Mihary ilay nanao sain-jaza fahiny, fa efa Mihary, manana ny maha-izy azy.
- "Hay, vonona ianao ! Efa miha-alina koa ny andro! Tonga dia handeha isika an! Izaho no manasa anao na dia izay taona maromaro tsy nifankahitàna izay aza," hoy i Hery.
- "Tsy maninona ka, fa amin’ny manaraka dia izaho no miantoka! Mahagaga tokoa fa ny efitra antsika sy ianao dia mitovy tanteraka, na dia ny lamba sy ny fanaka samihafa aza."
- "Ka Hotely ange ny ato e! Andao handeha fa ianao rahateo vizaky ny dia, mila matory aloha."
Iny i Hery sy Mihary nandray fiara nankany amin’ny trano fisakafoanana akaikin’ny moron-dranomasina. Nifampitafa. Namerimberina ny fiarahana fahiny, nanontany ny vaovaon’ireo mpiara-mianatra nilaozana hatramin’izay.
Dia nifankahazo am-po tsara. niresaka ny amin’ny asa sy ny iraka ataony avy:
- "Inona no tena anirahan’ny minisitera anao aty fa tsy azoko tsara?"
- "Hanao famelabelaran-kevitra momba ny reny bevohoka sy ny ady amin’ny tazomoka aho rahampitso. Ary amin’ny alatsinainy, misy atrik’asa sy fandalinana manokana mikasika izay ihany. Sady mba maka fialan-tsasatra ihany koa e ! Zara aza mba misy izao, sady tafiditra ao anaty faran’ny herinandro hialàna sasatra. Hazakazaka lava anie ny ao Antananarivo ao e ! Ny rivotra mila tsy ho tanty intsony."
- "Marina tokoa izany teninao izany, izaho koa tena miha-vizana mihitsy amin’ny asa. Dia izao faly mahita anao izao aty. Zara aza ny orinasa no miantoka ny lany."
Nandeha teny amoron’ny ranomasina izy ireo rehefa vita ny sakafo, betsaka ny olona nifamezivezy teny, ny andro koa diavolana, ny kintana no mameno ny lanitra. Feno olona misakafo sy mihinana masikita eny amin’ny sisin-dalana akaikin’ny Alliance Française iny. Efa miha-tonga ihany koa ny mpanao vakansy, ary mameno ny arabe ireo fiaran’Antananarivo mitsidika an’i Mahajanga. Eny no fotoana hifankahitàna sy ifanomezana fotoana, iresadresahana, ijerena ny ranomasina somary mangina tsy dia manonja akory. Ary eny koa ny zanaky ny alina no mihaodihaody hitady izay jonoiny amin’iny alina iny.
Nitodika tany amin’ny ranomasina izy ireo dia nifampiankina moramora.
- "Ohatran’ny mampihomehy fa tsy niezaka mihitsy aho na dia ny hanoratra tany aminao aza tany Amerika tany."
- "Eny e ! na dia izaho koa ! repotry ny fianarana sy ny olana mitranga samihafa, isika koa moa tsy tena natao hoe nifankahazo tanteraka talohan’ny fanadinana dia naleo aza tsy nahatsiaro intsony."
Ny nahagaga dia isaky ny resaka momba azy roa tsy maintsy miafara amin’ny fahanginana foana. Asa, mety misy afo mirehitra foana any anaty fon’izy ireo tsirairay any fa tiany hotondrahana rano ho faty fa tsy avelan’ity tany be fahoriana ity tsy hihaona sy hirehitra hiredareda indray.
Tsy naharitra ela teo akory izy ireo fa samy vizaky ny dia natao, indrindra i Mihary, dia nitodi-doha niverina tany amin’ny hotely indray, haka torimaso amin’izay.
Tonga teo an-tokonana ! Dia samy nirary torimaso mamy sy nifanao veloma. Samy niditra tany amin’ny efitranony ny tsirairay. Niara-namelona fahitalavitra , samy fandaharana mitovy no nojerena. Tantaram-pitiavana maneho ny fitiavan’olon-droa mifanalavitra. Niara-natoritory sy naka aina tsara. Nieritreritra ny fiainany teo sady nanao fampitahàna ilay sarimihetsika amin’izay manjo azy. Rindrina sisa no nampisaraka. Rindrina manakona ny fiainana roa mety miara-dalana. Rindrina sisa mety hiaro an’i Hery amin’ny fakam-panahy. Ary rindrina kely sisa manakona ny tsy nifankahitan’olon-droa nifankatia efa ho sivy taona lasa.
Tampoka, nitsangana i Mihary namonjy ny varavarana. Nivoaka ny efitranony, vao saika handondona, i Hery koa manokatra ny varavarany sady taitra nahita an’i Mihary efa manoloana azy.
- "Hery!" hoy ity zazavavy, sady nisarangotra teny amin’ny sorok’i Hery no namihina azy mafy. "Tsy avelan’ny fotoana tsy hifankahita isika. Nalahelo anao aho tany, ary fantatro tsara fa mbola tia anao foana aho."
Iny Mihary nanakatra ny molotr’ity « malalany » izay nanaiky ihany koa satria nahatsiaro loatra ny fahiny.
Niredareda tampoka tao am-pony ilay afo tena nitsilopilopy kely hatramin’izay. Niverina nahazo aina, nanafàna ny fon’izy ireo ; Nifanoroka ela, nifamihina mafy koa, niditra tao an’efitra ary nakatony varavarana.
Nifanakalo fitiavana tamin’ny oroka mamy teo izy fotoana fohy. Dia nifampitarika nipetraka teny ambony fandriana. Namerina ilay oroka teo indray, ny tanan’i Mihary amin’io eny an-tendan’i Hery, midina manafosafo ny tratrany mitsapa sady manindry mora ny hozatra manodidina. Lehilahy sady bikàna no manana endrika. Naka fy sy mitsapa ny herim-batan’ity olona horohany. I Hery kosa mitazona mafy ny valahan’i Mihary ary mamikitra ny molotra toa malai-misaraka izany.
Ilay tanan’i Mihary avy eo nihodina nankany aoriana namonjy koa ny lamosin’i Hery ary nidina nikaroka ny morotr’akanjo ambony nanaovan’i Hery.
Natsofony tany ny tanany naka hafanàna ary nampiakatra ilay lamba manify nanaraka ny lamosiny. Ny safosafony amin’io malefaka dia malefaka. Mandalo ny hazon-damosina mafy sy mahery vaika.
I Hery kosa, nikisaka kely nanoroka ny tarehiny sady nandalo ny hatoka naka ny fofona manitr’i Mihary. Nitsiry taminy ny faniriana handry amin’ity fitiavany voalohany, efa faniriany taloha hatry ny ela saingy tsy hitany indray raha tsy izao. Tsapany koa ny tanan’i Mihary manainga ny akanjony ambony ary somary niala tamin’i Mihary vetivety izy, nikisaka sy niditra lalindalina kokoa tamin’ny fandriana, nanala ilay akanjo teo ary niseho niharihary amin’izay ny toe-batany tomady sy bikàna nahafatifaty vehivavy mihoatra lavitra ny iray.
Nipetraka izy nijery ity tovovavy eo akaikiny, nijery izato bika niofo sy niova ho tena vehivavy.
Mihary kosa, nipetraka teo ambony lohaliny, nifanatrika. Ny tongony roa no naforitrany dia niarina indray izy nandohalika, nanankina ny tratrany tamin’ny tarehin’i Hery, nisy hafanana nifandrirotra tamin’izy roa, i Hery nahatsapa ny halemilemin’ny nonon’i Mihary, ity farany kosa, nahare ny hafanana nivoaka tamin’ny molotr’i Hery mitohaka amin’ny akanjony manify.
Nahodin’i Hery tany aminy avy eo tanany roa, namatotra an’i Mihary hitohoka eo amin’ny molony. Nanafosafo indray ny lamosina, ny dongona roa malemilemy ary nidina hatreny amin’ny feny hanakatra ny moro-tongotr’ilay raoby manga tanora. Ningainy moramora, nakariny hiakatra. Saingy nalatsany indray, nitady irika kely izy hanorohana mivantana ny tratran’i Mihary, norohany homeny hafanana. Iny oroka iny no niampita namelona ny tsirim-pitiavana hampiray azy roa.
Tsapan’i Mihary fa mando ny fivaviany, efa notadiaviny koa, vetivety dia hitan’i Hery ny famaha ilay akanjo raoby avy ao aoriana ary notaritiny hidina, teo amin’ny tadi-nono dia najanony, novahàny tamin’ny tanana efa zatra tokoa, dia notohizany indray hamaha tanteraka ilay famaha teo.
Ilay tanany avy eo niakatra indray nanafosafo mivantana ny lamosina, isaky ny santimetatra dia nisy onjam-pahafinaretana nandalo tamin’i Mihary, ny tanany no mamikitra mafy amin’ny lohan’i Hery mbola manoroka ny tratrany. Vetivety dia nilatsaka ilay raoby ary nanaraka azy teo ilay tadi-nono.
Namonjy moramora ireo nono roa avy eo ny tanan’i Hery, nitsapa ny haleminy, nono somary kelikely nefa miatrika tsara, vontom-pitiavana efa te-hiray rahateo.
Niahaka tamin’i Hery tanteraka i Mihary, nanolotra ny vatany ho azy, ho an’ity olon-tiany nilaozany elabe.
Efa ela no nahatsapan’i Hery ny fihenjanan’ny filahiany, efa naniry mafy an’i Mihary izy raha vao nifanoroka fotsiny izy ireo. Niala vetivety monja, nanala tanteraka ilay raoby teo amin’ny lohaliny. Tsy tratra fa novahany haingana koa ny patalohan’i Hery, ary natosiny hidina, ity iray nanampy sady nanainga ny maojany ary samy iray sisa ny fitafiana teny amin’izy roa. Ny iray fotsy ranoray, ny iray mainty misy dantela manify dia manify manaraka ny vatany.
Hita teo ilay silipy fotsy efa mibontsina managadra filahiana efa tena mihenjana. Nosafoin’i Mihary vetivety dia nakariny ny tanany, nifanoroka indray izy roa. Nifanome hafanana, hafanana nitondra fitiavana, fitiavana nitondra fahafinaretana, ary fahafinaretana hitondra fahasambarana.
Avy eo dia niarina, nitsangana teo amorom-pandriana dia nidina tamin’ny tany, nanakatra ny faritry ny filahian’i Hery, nosafosafoiny ilay silipo fotsy, nosafoiny ny fe dia nakariny indray. Avy eo nosintoniny vetivety ilay izy ary niseho tanteraka ny fihenjanan’ity hazo tokana mifono nofo mahery. Natsangany tsara, nosafoiny, nofeheziny ary nofenjainy tamin’ny ratsan-tanany.
I Hery amin’io mangitakitaka ny any anatiny any. Isaky ny mandalo manafosafo ny voan-tsirinainy ny tanan’ity olon-tiany dia mangoritsina kely ny any anaty lohany any. Eo am-pelatanan’ity tovovavy ity ny fahafinaretany tsy tiany hajanona. Dokotera matihanina amin’ity raharaha ity no mikarakara azy.
Nanondrika ny lohany i Mihary, nanoroka ny fari-pahasambarana somary voloina madinika, nanaraka ny vatam-pilahiana, teo amin’ny lohany dia ny lelany no nanafosafo ilay hoditra malama, farany, ny molony no nakombony ary nampidiriny amin’izay ity taovam-piraisana lehibe ary nameno ny ati-vavany. Ningainy kely dia navoakany indray, nosafoiny tamin’ny tanany, naveriny natsofony tany indray.
Tsy naharitra i Hery fa nimenomenom-pitiavana tamin’i Mihary, te-hanao mafy izay atao aminy, ny tanany manafosafo ny volon’ity tovovavy mikarakara azy. Farany, niantso an’i Mihary izy hiakatra eo ambony fandriana, dia nanaiky ary nifanao ambony ambany izy roa, niverina indray ilay nataon’i Mihary, i Hery kosa nanala ilay atin’akanjo mainty ary nandatsaka azy moramora. Ny maojan’i Mihary avy eo no misabaka eo ambony lohan’i Hery, hitany amin’izay ilay faritra maha-vehivavy efa tsy andriny intsony, malama tanteraka, nosafoiny ilay faritra, efa mando dia mando, vao nandalo ny tanany dia nisy tsipika hamandoana nandranoka vetivety nanaraka ny ratsan-tanany, nibitaka hafaliana tamin’izay i Mihary fa ny filahian’i Hery no nopotseriny mafy.
Tsy nanana eritreritra hafa intsony i Hery, ny tiany hatao farany, ny hanome an’i Mihary ny lanja mitovy amin’izao ataony izao.
Nosintominy ny maojan’i Mihary hanatona ny molony, naka tsiro teo izy, i Mihary manomboka mipararetra, tsy nahatàna ny fihetsiny, isaky ny mandalo ny lelan’i Hery eo amin’ny bokotry ny fitiavany, izy te-hikikiaka mafy, te-hitroatra amin’ny onjam-pahasambarana manefika azy. Farany, tsy tantiny intsony, niala tampoka, ny fivaviany efa mandranoka izay tsy izy, ny lohaliny malemy toran’ny rian’aratra madinika nameno ny tongony. Nandady moramora ary nipetraka teo ambony kibon’i Hery. Natsangany tamin’ny tanany indray ilay filahiana, najorony tsara, ary natohony teo ny fivaviany, nasafosafony teo, i Hery amin’io nahatsapa faniriana mafy, ary miandry fotsiny ny ataon’ity olon-tiany. Tobaky ny hamandoana ny lohan’ny filahiany ary vao mainka aza nampihenjana azy mafimafy kokoa.
Tamin’ny fihetsika malemy no nampidiran’i Mihary azy tany anatiny tany, ny lanjany iray manontolo no nalatsany hidiran’ny filahian’i Hery, nakimpiny faran’izay mafy ny masony, nakatony tahaka izay koa ny hozatry ny fivaviany rahafa tonga hatramin’ny farany.
I Hery etsy mankafy, mahatsapa ity fivaviana manery ny filahiany.
Tsy nihetsika elaela teo i Mihary, nampijanona ny sefosefony, farany nosokafany ny masony, nojereny, nikoropaka tampoka izy naka izay lamba teo akaikiny teo, izay voarain’ny tanany fotsiny kanjo ilay silipo fotsin’i Hery no voarainy. Iny no nalainy namafany ny faritra maha-vehivavy azy.
Gagagaga i Hery, tsy hitany izay mitranga ao aloha ao, niarina izy nijery. Niezaka nanafina i Mihary, kanjo hitany ihany fa niavaka be ilay menamena nitakosina tamin’ilay silipo.
-« Mais, tu es….vierge ! », « pu*$£¤ de &%$*§de », sady niteny ratsy izy no niala tamin’i Mihary tampoka, ary nitsangana niala tamin’ny fandriana. Taitra ny anao lahy, taitra satria tsy nampoiziny ny zava-nitranga taminy. Taitra ary nivadi-po tamin’ny zava-bitany.
Fanindroany izao no nanaovany toy izao, ary tamin’i Alexia ihany no farany.
Niforitra teny ambony seza izy, toa nahatsiaro menatra tamin’i Mihary.
- "Tsy noheveriko hanao toy izao ianao, raha ny mahazatra, ny lehilahy lasa …" - - "Hery an ! tsy azoko mihitsy. Sao dia misy aretina ary ianao dia manenina."
- "Tsia an ! tsia dia tsia ry Mihary, fa tsy nampoiziko mihitsy, tsy ninoako mihitsy izany hoe ianao lasa tany Amerika dia niverina avy any mbola virjiny izany"
- "Misy foana ny maningana. Fa resahiko aminao ny antony amin’ny manaraka. Fa izaho ve aloha havelanao amin’izao!" sady nahatsiaro menatra i Mihary no nisintona lambam-pandriana horakofany. Nidaboka izy avy eo, toa nahatsiaro nenina ihany koa.
- "Raha ny mahazatra fa tsy fantatro loatra, ny lehilahy aza vao mainka faly raha manaisotra ny maha-virjiny ny vehivavy, na misantantra ny firaisana voalohany, nefa ity ianao toa akoho voakapoka mitakoko samirery etsy ambony seza." Nisalobona tao anaty lamba izy, ary tsy nijery an’i Hery intsony.
Tsy hitan’i Hery izay natao, i Mihary, i Mihary ve no nanolotra izay sarobidy taminy natolony ho ahy. Fa inona no dikan’izao?
Tsy sahy niatrika ny hazavàn’ny jiro intsony i Mihary, norakofany lamba tanteraka ny tenany. Naharary azy ny faritry ny fivaviany, ny fanaintainana nanakotsako. Fanaintanana niharo nenina, nenina tamin’ny nataony teo. Reny fa maharary azy isaky ny mikitika iny faritra iny fotsiny ny tanany.
Nefa dia notereny ihany na dia maharary aza, notohizany satria tiany handramana ny hahazo fahafinaretana anatin’ny fanaintainana tsy maintsy nolalovany. Ny ratsan-tanany roa no naveziveziny tsimoramora teo amin’ny molotry ny fivaviany. Safosafo mora, malefaka dia malefaka, hamelona indray ny loharanom-pahasambarana tapaka teo. Ratsan-tanana efa nihoatra ny sehatry ny fanandramana, efa mahay mankafy, ny sainy no nalefany tany amin’ilay olona niriny fatratra hampita azy ny dingana farany ho tena maha-vehivavy azy, tahaka ny taloha, tahaka ny fanaony fony izy samirery. Tsy iza io fa i Hery.
Nisokatra moramora indray ilay molotry ny fivaviany, niverina nandranoka ilay voankazo mamy nisantatra ny fiainana teo.
Niezaka ny tsy hihetsika loatra mba tsy hahitan’i Hery izay nataony tao anaty lamba tao. Tiany ho fahatsiarovana tsara fa tsy ho nenina entiny miaina mandra-maty ilay fanapahan-kevitra hiala amin’ny maha-tovovavy fa hisantatra kosa ny toerany vaovao dia ny antsoina hoe vehivavy.
Voakajy antsakany sy an-davany ny hetsiky ny tanany rehetra. Isaky ny kisaka milimetatra iray ny fanondrony dia voatanjona hitondra fahafinaretana ho azy.
Ilay fanaintainana teo tiany hahena, ary ny fahasambarana kosa tiany hitombo.
Tsy nihevitra zavatra hafa intsony i Mihary, tahaka ny voafafa avokoa izay rehetra manodidina azy. Izy irery manoloana ny faniriany.
Injay fa nisokatra ilay lamba nosalobonany teo, tsapany misy hafanana manakaiky ny tavany, oroka malefaka fotsiny dia nampangorintsina ny sofiny. Nitodika kely izy, ny masony mbola mikipy, dia nanolotra ny molony tamin’ity tarehy mitondra hafanana ho azy.
Oroka faran’izay mamy no nifanaovan’izy ireo, oroka nampitosaka indray onjam-pahafinaretana vaovao, nitambolona tany an-kibony tany, niverina nandranoka ilay voakazom-pitiavana, toa zary tsy tsaroana intsony ilay fanaintainana saika nandifotra azy. Ny ratsan-tanany rahateo nanampy tosika hatrany, farany niala tanteraka ilay lamba norakofany, hany fitafy sisa dia ny rivotra tonitony tsara nameno ny efitra. Naka toerana nandry tamin’ny lamosiny izy avy eo, ny feny somary naforitra nanome vahana ireo tanany teo amin’ny elakela-peny.
Ny fahitan’i Hery an’i Mihary manafosafo ny zohim-pahafinaretana dia nampihenjana indray ny filahiany hatramin’ny faran’ny mafy indrindra. Noraisiny tamin’ny tanany ny azy dia nosafoiny mora koa. Naveriny ilay oroka mandadilady ny vatan’i Mihary teo, nandalo ny tendany, ny nonony, ny lelany nikitikitika ireo loha-nono ary nanaitra tampoka ity vehivavy fa toy ny nolalovan’aratra ny kibony. Niala tampoka avy any ambany ny tanan’i MIhary, namonjy ireo nonony ankiroa, nitady ny loharanon’ilay rian’aratra teo.
I Hery kosa, nidina hatrany, nanorokoroka ny kibo sy ny foitra, nidina hatrany amin’ny faritry ny fahasambaran’i Mihary, hafanana mivaivay no tsapany amin’ny molony.
Nakombony ny molony roa nisintona ilay hozatra kely efa nibontsina sady nivoitra tamin’ny toerany. Niainga tampoka i Mihary, tsara loatra ilay izy, tsy tiany hijanona mihitsy.
Nimonimonina saika hikiakiaka fahasambarana niserana tampoka tany an-dohany tany, nampidinin’i Hery amin’izay ny lelany hitady ilay zohy vao nosokafam-baravarana teo handray fiainana vaovao. Natsofony moramora, lela nitondra hafanana sy ody ratra nanaisotra tanteraka ilay fanaintainana hany sisa nitoetra tao. Molotra efatra no nifangaro hitambatra ho iray, ny lela no nisantatra ny dia ho an’ny fahafinaretana mbola mety tsy hitan’i Mihary mihitsy.
Isaky ny mandalo ilay faritra naratra teo ny lelan’i Hery, i Mihary kosa manindry mafy ny lohany toa manampy azy hiditra amin’ny lalindalina kokoa.
Farany, nitobaka tsy voatana intsony ilay fahafinaretana, tratrany ilay fahasambarana notadiaviny hatrany am-boalohany.
Nadabony tamin’ny fandriana avokoa ny ratsam-batany rehetra, naka aina, sady nitsiky kely no naka sasatra ary teo izy vao nanokatra ny masony.
Nandrasan’i Hery tsara ny fitsonik’ilay voankazo voarara, voankazo namela mamy taminy ary tiany hidirana sy handramana fanindroany.
Nifampijery vetivety izy roa, ny tanan’i Mihary nisarika ny lohan’ity lehilahy hiakatra manaraka ny vatany. Nikorisa niakatra moramora, nifampita hafanana efa mandoro ny any anaty rehetra any. Ary nifanoroka indray, hadino any ivelan’ny trano any izay hoe kiriko, na henatra fa fitia mifamaly no niraisan’izy roa.
I Mihary tsy nahahetsika teo amin’ny toerany intsony, i Hery kosa, te-haka amin’izay ilay anjara tandrifim-pahafinaretany. Ny filahiany mbola mihenjana tsara, te-hanafika amin’izay hitady ilay fahasambarana vaovao, ny sainy efa mikaro-pitiavana homen’i Mihary. Niharina kely izy dia nosokafany tsara ny fe an’i Mihary roa, izay avy hatrany koa dia nanaiky. Naka toerana tsara, nitohoka teo amin’ny fivavian’i Mihary efa mandon’ny hasambarana.
Nasafosafony elaela teo ilay satroka malamalama manopy mena. Voarefy tsara ny fihetsika rehetra, nanomboka nampidiriny amin’izay, nilentika moramora. Tsapany fa mbola niverina ilay fanaintainana tamin’i Mihary, fa ny tanany misaringotra mafy amin’ny lambam-pandriana, nanakimpy ny maso, ary manidy vazana. Ny tanan’i Hery nikaroka izay hozatra mety hampitony izany, noriny moramora, ny maojany kosa manosika hatrany ny filahiany mba ho tafiditra tsara. Nijanona izy, niandry kely, nijery ny fihetsik’i Mihary, dia nahemony tsimoramora indray. Tsy tafavoaka akory dia naveriny niditra indray, niharoharo tamin’ny Mihary ny fitiavana, fahafinaretana, fanaintainana, tsapany amin’izay ny fiantraikan’ny ity filahiana lehibe mameno ny atim-pitiavany. Reny ny fiitatry ny fivaviany, isaky ny tafiditra any anatiny lalina any ny loham-pilahian’i Hery dia noketohiny tamin’ny hozatra malemy. Dia tahak’izay foana. Fihetsika mora sy feno fitiavana no nasetrin’i Hery azy.
Farany, toa tsy tantin’i Hery intsony, nalefany mafy ny fihetsiny, arakaraky ny hamafin’ny fiditry ny filahian’i Hery no nampikia-pahasambarana an’i Mihary, tonga indray ny onjam-pahasambarana faharoa, ary rehefa tena akaiky koa ny an’i Hery dia navoakany tampoka ary nifatsitsitra amin’izay ny tsirin’aina fotsy niraraka tamin’ny kibon’i Mihary.
Nifampijery izy roa, samy nisefosefo, dia nidaboka teo am-pandriana koa i Hery namonjy an’i Mihary. Torovana, vizana, tahaka ireny lakana kely entin’ny ranomasina miditra ny morony ireny izy ireo nifamihina sy nifanakalo oroka malefaka.
Dia niverina indray ilay fahanginana minitra vitsivitsy.
Ary afaka kelikely vao nisy niteny mora:
- "Tahaka ny tsy mino aho, tahaka ny manonofy," hoy i Mihary niteny irery.
- "Fa ahoana?" hoy i Hery.
- "Naharary be ahy tamin’ny voalohany, nefa izao .... Tsy efa lanitra faha-efatra ambin’ny folo ve no nomenao ahy teo?"
Nihomehy fotsiny i Hery ! varimbariana ihany koa, tsy nahasahy niteny intsony ;
Dia notohizan’i Mihary indray ny resaka.
- "Efa tsy nampoiziko intsony!"
- "tsy nampoizinao ny inona?"
- "Efa tsy nampoiziko intsony ny mbola nisian’ny ra teo!"
- "Vao mainka tsy azoko!"
- "Hazavaiko kely aminao, noho ny fandalinana nataoko tamin’izahay nianatra momba ny fananahana, dia rehefa mitombo taona ny vehivavy virijiny, tahaka ahy izao, ary indrindra ireo manao « caresses intimes » matetika dia lasa malemy tahaka ny fingotra ny fivaviany, hany ka maro ireo lehilahy no diso fanantenana satria ilay vehivavy mbola tsy nanao nefa tsy nisy ra nivoaka akory. Misy ny tranga ohatr’izany fa tsy midika akory izany hoe ny rehetra. Misy aza ny efa manao in-droa, in-telo mbola tsy vaky ra ihany."
Nitsangana tampoka i Mihary, nifoha dia nandray ny efitra fandroana sady nosarihiny nanaraka azy i Hery.
Nalefany mafy ny rano, nifatsitsiatra tamin’izy roa, nifampisafosafo, nifanoroka hatrany. Vita ny fandroany dia tsy naharitra intsony i Hery fa nanontany.
- "Mihary an ! Misy zavatra tena tsy azoko mihitsy, ary izay no nampi-tsamboatra ahy teo ! Valo taona ianao tany Amerika, ny olona any, vao miaraka iray andro fotsiny dia miafara eny ambony fandriana, nefa isika vao nifankahita dia tonga dia nanao. Na olona inona aza ve aho dia tsy ho taitra hoe virijiny no niaraka tamiko nefa tonga dia nanaiky tsy am-pihambahambana akory. Tena tsy azoko e!"
- "Misy antony manokana ao fa hazavaiko anao amin’ny manaraka. Izaho rahateo moa sodokan’ilay hoe tsy mbola manambady ianao dia namerina indray nampirehitra ny afom-pitiavako tany anatiko rehetra tany."
Tsy nahateny intsony i Hery, tany an-tsainy tany, Tsy manambady ! tsy manambady ve aho? Nefa, vita fisehoana tamin’i Alexia, efa dingana iray lehibe izay nefa toa tsy noraharahiako akory. Nolotoiko tamin’i Malala aloha, dia notohizako tamin’i Tahiana, dia izao indray i Mihary, vehivavy tsy manan-tsiny akory fa nahatoky ahy fotsiny noho ny fitiavany ahy hatrany am-boalohany, tsy nahalala, fa tonga dia roboka tokoa aho.
Fa maninona aho e! Fa maninona no tsy manana hery mihitsy hahatohitra ny fakam-panahy? Nefa dia Hery no anarako?
Teo izy dia lasa saina tamin’ilay tenin’i Tahiana tany Antananarivo, ilay hoe « tsy aleonao ve miala tanteraka amin’ny fianakavian-dRatrema, aleo manimba ny fon’i Alexia in-dray mandeha toy izay mandia lalan-tsarotra malama sy hamingana ary handratra any aoriana? »
I Mihary nanandrana naka torimaso teo an-tratran’i Hery, vao tonitony anefa izy dia nanomboka niverina indray ilay fanaintaiana na dia somary nihena aza.
I Hery kosa miady saina lalina, feno fisalasalàna, tsy te-handratra na iza na iza ! Nefa te-hivoaka ho mpandresy hatrany amin’ity olana tsy mitsaha-mitombo mianjady aminy.
Iza ary no ho safidiny, i Alexia izay tena tiany tokoa ary tsy mbola nisy fihenany aza. Sa i Mihary izay voaloham-pitiavany. Samy nanome an’i Hery ny tsara indrindra taminy ireo ! Samy nanome ilay fitiavana madio tsy nisy pentina akory. Ka iza, iza amin’ireo, sa olon-kafa mihitsy? Sahiko holazaina amin’i Mihary ve ny manjo ahy? Tokony havelako ve i Alexia fa efa tolotr’Andrianamitra amiko ity Mihary ity? Ahoana anefa ny hahavitàko izany?
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 3:: Hametraka hevitra (4) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Tsy hitan’i Tahiana akory ny nanarahan’i Manitra anay, ny valin-drihana rahateo tonga dia nanakona azy ary raha tsy tafiditra tao an’efitranony izahay telo vao nikentrona kely izy nijery an-jandriny.
- "Misy zavatra ilain-dry angaha ry Manitra?"
Tsy niteny ity farany fa, nanohy ny tsikiny ihany sady nanomboka niangolangola fihetsika.
- "Manitra an !azon-dry avela irery ato ve aloha izahay sy Hery fa mbola misy zavatra tianay halamina tsara. Sady natositosiny ho any amin’ny varavarana ity zandriny vavy.
- "Andray akia ry Tahiana," hoy ity zandriny, sady niangotingoty taminy ihany, te-hilalao fitiavana miaraka aminareo ange aho e! Fa angaha tsy… sady nomeny oroka kely teo amin’ny takolany havia ity zokiny, tena manakaiky ny molony.
- "tsy … ahoana koa ary," hoy i Tahiana sady nanomboka tezitra.
- "Hay izany rehefa nahazo izay nirina dia adino ny nanala ny fanaintainana fahiny. Lany ny rondohako hanomezana fitiavana an-dry dia mba mila izay tambiny aho, nefa izao no ataon-dry. Lasa izy, sady nirintona no nakaratony mafy ny varavarana.
Nanomboka kaodikaody aho, toa tsy mitombina intsony ny tao an-tsaiko. Te-hody tampoka, ny andro anefa manomboka mikotroka mafy ao ivelany ao.
Na dia olona tsy mandalina akory aza dia mahalala fa misy misitery marina ny amin’ny fiainan’i Tahiana sy ity zandriny ity. Efa notantarain’i Tahiana fa nisakaiza tamin’i Malala akory aza izy. Dia hay izao hita mivantana izao ity sangim-pitiavana ifanaovany amin-jandriny.
Mazava amiko amin’izay ny nahatonga azy tsy nahita izay mba anjara tandrifiny hatramin’izay. Tsy te-hitoetra amn’ity trano ity intsony aho na dia iray minitra monja aza. Aleo ny lalana mody no asiana olona sady ny tranoko koa miandry ahy any an-tanàna.
- "Tahiana an ! metimety amiko kokoa ny mandeha mody fa tsy te-hahita tantara hafa eto aho!"
- "Hery an ! iangaviako an-tanan-droa ianao mba hijanona aloha fa tsy maintsy hazavaiko aminao ny zavatra mitranga. Hery!"
- "Tsy misy tokony hazavaina intsony izany ry Tahiana an! sady somary tezitra koa aho. Dia sahinao ve ny manao toy izany nefa vao ny maraina teo ianao no nilaza fa tsy namerina ilay nataonareo intsony ianao sy Malala. Tsia an! Tena sarotra be ny fandidiana raha izany. Inona marina no tanjona tena tianao hahatongavana, fa raha izaho manokana no mijery dia matahotra mafy ny ho lany zara ianao io dia misarangotra amin’ny hazo tsy fantatrao akory."
Tsapako fa nandratra azy izay teniko izay fa nanomboka nanganohano ny masony. Ny tanany mandringotra ahy hipetraka teo ambony fandriana, nefa izaho tsy tana intsony fany hody no masaka ao an-tsaiko.
- "Hery an!" hoy izy sady nitomany no namihina ahy mafy. "Diso aho e! aza avelanao irery aho fa mila namana hanohana ahy."
Mba misy ny zavatra tsy tantiko amin’ny fiainana fa ny mahita vehivavy mitomany, nefa ny teny nataoko teo no nampijohy ny ranomasony. Izy rahateo vao mainka nigogogogo hatrany. Naleoko namoaka ny hambom-poko tao anaiko sady niteny taminy hoe:
- "Tahiana an ! tsy misy fanantenana ny amintsika mihitsy ato anatiko, ary tsoriko fa tsy tia anao velively aho."
- "Hery!" Sady nanomboka nifokofoko izy dia nigogogogo nitomany, maso efa menan’ny ranomaso no nijery ahy, nisintona indray ny tanako fa nakifiko, lasa koa aho nanatona ny varavarana, dia nitsangana izy nanaraka ahy sady niantso mafy teo amin’ny tohatra hoe:
- "Hery an ! avia fa miverena e!"
Nipitrapitra fotsiny izy nijery ahy nidina tany ambany, ary vao teo an-tokonana dia injay fa niverina tany an’efitranony tany izy sady nakatony moramora ny varavarana. Reko hatrany ny figogogogony na dia nihena tamin’ilay varavarana nihidy aza ny feony.
Raha vao hanatona ny varavaram-be fivoahana ny trano aho dia indro i Manitra mijoro sady mibahana ny tokonana niandry ahy tsara. Nobanjininy mafy aho sady notondroiny tamin’ny fanondrony.
- "Fa mieritreritra ny ho aiza ity ianao? hoy izy sady tsy niala teny amin’ny masoko mihitsy ny fijeriny.
- "Sshh ! tsy hidiranao izany fa tsy tananao ato izany aho."
- "Fa mihevitra ianao fa avelako hiala maina amin’izao."
Mba fantatrao moa fa ny olona toa anao izao no nandratra ny fony sy nampitolefika azy? Taiza ianareo lehilahy tamin’ireny fotoana mafy nahazo azy ireny? Asa ny fihevitrareo anay vehivavy fa angamba ho tahaka ireny karatra famahana ampiasaina amin’ny finday ireny, ka vao vita ny ilàna azy dia atsipitsipy etsy sy eroa. Mieritrereta ihany fa raha nisy ny nampahery azy voalohany tamin’ny andro nahakivy tanteraka azy, dia izaho rahavaviny. Afaka nanome ny tambitamby sy safosafo ary fitiavana malefaka afaka nanala ny sorisoriny. Ka izao ity ianao, mihevitra indray ny handratra ny fony efa mba nanakom-pery? Sanatria izany, aza mihevitra ny hivoaka eto mihitsy raha tsy te-hahita loza; ary mikasiha tanana ahy eo fa hitanao ny hanjo anao."
- "Tsy fombako mihitsy ry Manitra izany mikasi-tanana vehivavy izany an! Fa raha azonao atao dia avelao fotsiny aho handeha!"
- "Raha azonao hatao, hoy ianao? Tsy azoko atao. Tsy fantatrao angaha fa izao indray i Tahiana vao mba nitempo fitiavana marina izany efa ho taona maro izay. Andàna ianao miakatra, dia alamino ny olana misy aminareo fa raha mamoy fo eo io rahavaviko io dia tsy hamelako ianao."
Vavam-behivavy izany ka vavam-behivavy. Indraindray tokoa aho dia manenina ihany amin’ny zavatra tokony noteneniko sy nataoko. Raha izay tokoa aho mantsy no niteny tamin’i Tahiana hoe avelao i Manitra mba hiaraka amintsika teo dia efa … ny lanitra fahafito aza izay efa nihoarana…
Saika hifamaly tamin’i Manitra aho. Tsy mety mihitsy ireny nataony tamin’i Tahiana teo ireny. Aiza ve ka izy mangala-ketsa indray no avo vava. Vavan’olona izany?
Raha lehilahy no manao ahy toy izao dia efa nosintomiko hiala amin’io varavarana io dia natsinkasiko tamin’ny tany. Fa soa ihany fa vehivavy, ka na dia mitomban-dahy tahaka izao aza, aleo ampandeferina ihany ny hambom-po. Sao dia handratra olona eo vao loza.
Ka inona tokoa moa, inona no fatiantoka amiko raha mijanona ato amin-dry zareo aho. Tsy sanatria resim-bavy akory, eny e! tena toetrako mihitsy ny mora langolangoin’ny vehivavy, … langolaingoiny aza moa aho manaiky ka vao mainka koa aza tereny hanao izao sy izao.
Sady mody nihomehy an’i Manitra aho no niteny taminy hoe:
- "Tsy ratsy kosa ilay hoe tahaka ny karatra famahana an!.."
- "Ka hita koa! Fa angaha heverinao fa tsy marina izany! , no sady niova ihany koa ny endriny.
- "Aleo fa hiakatra ary aho e! Fanatanterahana ny sitrapon’i Madimôzely Manitra, sady mody nataoko eson-teny, fa tsy ilaiko kosa ianao hanampy trotraka ao indray."
- "Tsy maninona," hoy izy.
Dia niakatra tsimoramora ny tohatra aho, namoha ilay varavarana, kanjo nihidy. Niandry kely dia nanomboka nodondomiko.
- "Tahiana an!" (tsy nisy namaly), naleoko aloha niandry kelikely mihitsy sady nijoro teo amin’ilay lalan-tsara.
Segondra vitsy no nisaina dia nisokatra ilay varavarana, indro i Tahiana nangarangarana.
- "Avelanao hiditra aho?"
Tamin’ny teny manambitamby no nanaovako ilay fanontaniana, toa mangataka ny hamoram-pony hiditra amin’ny efitranon’ny fitarainany nefa efitrano fanehoam-pitiavany ihany koa. Tsy niteny izy fa ny varavarana no nosokafany tsara lasa namonjy ny fandriany izy ary niverina nipetraka teo anilany aho. Ny masony amin’io menan’ny ranomaso, ny tarehiny efa nofafàny ka namela diany teny amin’ny takolany ny manjamaso nahosony ny tarehiny ora vitsy lasa izay. Dia hitako nisoritra taminy tahaka ireny haingo voafafa ireny ny fahadisoam-panantenana namaivay tao am-pony.
Nidaboka teo am-pandriana izy sady nijery taty amiko. Maso mitory fitiavana tsy miloaka. Niverina nanganohano indray ny masony, dia nampiako safosafo ihany koa hampitony ny alahelony. Narakotro azy ilay lamba no sady nomeko oroka kely teo amin’ny takolany. Ary naleoko ny fahanginana no nampanjakaina hampitony ny alahelo sy ny ratra am-po nahazo azy. Ary tsy nisy teny nivoaka taminay na dia iray monja aza. Navelako izy hatory ary raha tsy afaka ora iray aho vao niala teo, nijaikojaiko mora aho avy eo nidina tany ambany.
Nanontany an’i Manitra aho izay misy ny trano fandroana, dia natorony ahy sady naka saina teo aho ny amin’ny hataoko rahampitso. Vita izay, i Manitra niandry ahy teo ambony seza lava, nila resaka tamiko izy, dia nifampitafa teo izahay. Notantarainy tamiko avokoa ny fiainan’i Tahiana sy izay tantaram-pitiavany, ny fiarahan’izy roa…
Ary ny tena nahagaga azy dia izao i Tahiana lasa tia ahy, nefa efa an-tanoany maro izy tsy naneho izany na tamin’iza na tamin’iza.
Alina dia alina ny andro vao vita ny resakay, niangavy rahateo moa i Manitra ny mba hijanonako any amin-dry zareo amin’ity alina ity.
Naleoko nangataka taminy lamba horakofana. Mety amiko kokoa ny matory eo ambony seza lava, hoy aho. Dia tsy nisalasala izy fa nomeny ahy, ary lasa niverina tany amin’ny efitranony rehefa nifanao tafandria-mandry izahay.
Namelombelona ny fitiavako an’i Alexia teo aho, nahatsiarotsiaro ireo nataonay fahiny. Any izy izay, tsy fanta-baovao. Tsy naharitra ela aho dia resin-tory teo ambony seza teo ary tsy nahatsiaro izay ambonin’ny tany intsony noho ny havizanana.
Fa tao amin’ny efitranon’i Tahiana tamin’io:
Satriny aza i Hery nijanona teo akaikiny teo foana, nahafinaritra azy ny safosafon-tanana nandalo tamin’ny takolany. Nahatsiaro fahabangana kely izy raha nandao ny efitranony ity olon-tiany. Niezaka ny haka torimaso, fa tsy nahita. Farany, niarina sy nampirehitra ny jiro tao an’efitranony.
Nalàny avokoa ny akanjo rehetra teny an-kodiny, naleony nitanjaka sy nanatrika ilay fitaratra lehibe teo amin’ny larimoara. Notsapainy avy any ambany ny nonony roa, ningainy tsimoramora dia nalatsany tampoka. Nihontsana in-dray mandeha ilay izy dia niverina naka ny toerany tsara indray. Narahiny maso tamin’ny fitaratra tsara ny fihontsany teo.
- "Mbola tsy milatsaka", hoy izy, niteny irery.
Somary nanatona akaiky ilay fitaratra indray izy nijery ny kentrona kely tamin’ny tarehiny. Teo vao tsapany ny isan’ny taonany efa mandroso, mandroso tsy hay naverina, fa na dia ezaka maro aza no natao, tsy azo notazomina intsony fa lasa toy ny ravin-kazo nanintsana.
Azony ary tsapany tsara amin’izay ilay tenin’i Hery nandratra ny fony sy nampitomany azy teo. Miha-antitra aho, tsapako tanteraka izany hoy izy niteny irery tany antsainy tany. Iny izy niverina teo ambony fandriana sy nandry tamin’ny lamosiny, ny tanany ilany notereny teo anelakelam-peny, ny ilany navelany nanafosafo ny kibony sy ny nonony.
- "Vehivavy ah," hoy izy niteny irery, "mila lehilahy aho hameno ny fiainako!"
Naleony nitady fahasambarana, nitady hanalana hamoamo tamin’ny ranomasony teo. Notadiaviny ary tsy namelany mihitsy raha tsy torovana tanterakany ratsam-batany hahafahany mahita izay anjara torimasony anio alina. Ora roa monja anefa taorian’io anefa taitra indray izy, nivadibadika tao am-pandriana tao, niankavia, niankavanana. Fa tsy hitany intsony izay hatao, dia niarina indray naka akanjo mandry dia nidina tany ambany hiala hetaheta.
Hitako tovovavy iray tsara tatrehy sy bikàna nidina tsimoramora ny tohatra. Akanjo manify dia manify mena manopy mainty no mitafy ny vatany. Arahina atin’akanjo mena midorehitra misy dantela manify. Ny hazavana kelin’ny jiro dia ampy nahitako hakanton’ny fijorony manjavozavo tao anaty voaly manify tantera-pahazavàna.
Nidina ihany izy, ny ratsan-tanany no natendriny ny aro-fanina amin’ny tohatra. Namonjy nanatona ahy, niara-nipetraka tamiko teo ambonin’ilay seza lava.
Nalefako teny aminy ny fijeriko , notakariko ny tarehiny ary nosafoiko mora tamin’ny tanako. I Alexia io.
Tsy niteny izy fa nitsiky mora. Ny masonay nifanena dia nifampita hafatra feno fitiavana. Niondrika ihany koa izy nanakatra ny molotro. Oroka mamy tahaka ireny tsy nifankahita ela ireny no nifanaovanay. Nofeheziko tamin’ny tanako ny lamosiny. Sondriana ery aho mitsapa ny hakanton’ny bikany tsy manam-paharoa. Nekeny ny hikambana amiko teo ambonin’ilay seza, dia nifampitositosy, nifanoroka, nifampikaroka teo ny lelanay roa.
Tampoka, niarina izy sady nitsangana, niala teo amiko ary nihataka kely. Nihodina tamin’ny tongony dia nanatrika ahy indray.
Ny ratsan-tanany malefaka no namahany ny bokotra ambonin’ilay lamba manify. Natosiny hihataka fotsiny ireo tadin-damba teo amin’ny sorony dia nilatsaka tamin’ny tany ilay akanjo. Hatsaràm-bika izany, hatsaran-tarehy. Ny volony lava miondana any amin’ny lamosiny, ny masony tsy niala teny amiko intsony. Nanomboka nosafoiny ny kibony, nananika ny nonony misy tatiny mena mifanaraka tsara amin’ilay lamba manify teo. Tamin’ny fihetsika miadana dia miadana no nanafosafoany ny vatany iray manontolo. Nilendalenda fotsiny aho nijery azy, tsy te-hiala amin’ny toerako fa soa sy finaritra loatra ny mijery ny bikan’ity malalako amin’ny toerana misy ahy.
Toa manonofy aho, ary raha nofy aza, tsy tiako hijanona intsony.
Fotoana vitsy fotsiny dia nanatona izy, ny lohaliny no napetrany tamin’ny tany nakàny fitoerana. Nakipany hiala teo amiko ilay lamba nandrakotra ahy. Tsy sahirana mihitsy izy namaha ny patalohako ary nisintona izany, ny tanako koa nanampy azy amin’izay tiany hatao.
Mihahenjana hatrany ny filahiako. Nalàny koa ilay akanjo ambony teny amiko, ary samy atin’akanjo sisa no notafianay teo ambonin’ilay seza. Niverina indray ilay fifanonorohana, notadiaviny mafy aho, niriny ihany koa, tsy nisy teny na dia indraim-bava aza niloaka fa fihetsika fotsiny dia nifankahazoanay tany am-po tsy miloaka. Niala tamin’ny molotro ny azy dia nidina, nandalo tamin’ny tenda, ny tratra, ary ny lelany no nalentiny tao anatin’ny foitrako : nampangoritsina ny kiboko. Ny ratsan-tanako no nalefako hibango moramora ny volony, ny filahiako koa efa tena mihenjana ary miandry fotsiny izay hataon’ity malalako manaraka eo. Nalefany tany amin’ny filahiako amin’izay ny androatokon’ny eritreriny. Nosokafany ny silipiko dia nezahiny nalàna, ny maojako no ningaiko ary somary naforitro kely ny lohaliko mba hahamora izay tiany hatao. Vetivety dia nitafy ny rivotry ny alina ny hoditro iray manontolo, tsy nisy lamba intsony teny amiko. Nosafoiny indray ny filahiako ary nareniny hiatrika tsara. Nojereny, ny ratsan-tanany dimy no namehezany azy sady nosafosafoiny niakatra sy nidina. Ny ankihibe no nataony nanafosafo ny lohany malamalama, ny sisa kosa nanery tsimoramora ny vatam-pilahiana hahazoako aina tsara.
Natopiny vetivety teny amiko ny masony ary notorahany oroka tsotra, nalefany tany amin’ny filahiako amin’izay ny eritreriny manontolo. Ny hetsika nataony dia nahafinaritra ahy avokoa. Malefaka dia malefaka ny rantsany, toa manotra am-pitiavana tsara rindra ka nampientana ny tsirim-pitiavako rehetra nankafy izay nataony. Ny volony miparitaka eo ambony kiboko dia nanome ahy fahafinaretana hafa mihitsy ary tsy tiako hajanona mandrakizay.
Tsapako tamin’izay fa ny molony no manoroka ny filahiako, somary mandomando kely, dia notohizany tamin’ny tanany indray. Mandalo miserana vetivety ny fipaikan’ny lelany, nahodinkodiny. Tamin’izay ny molony efa reko nanomboka nampiditra ny filahiako tany anatiny tany. Tiako loatra ilay nataony : malemilemy, mandomando, ny molony mikorisa amin’ny hoditry ny maha-lehilahy ahy, mamelona ny hasambarana tsy ho tanako intsony. Nalefaka dia nalefaka ny fihetsiny rehetra. Dia somary nakatony kely ary nosintominy avy eo. Toa nisy onjam-pahafinaretana hafa mihitsy midaboka ato anatiko ary rehefa niverina izy nilalao ny lohan’ny taovako indray, nangorintsina tampoka aho, nisento tokana sady nanidy ny masoko hisaina izay nataony tao.
Dia niverina indray, nitelina tsimoramora, nisintona izay tany anatiko, onja mila tsy ho tanty fa vao mainka aza nanamafy ny fahafinaretako. Nahatsiaro sambatra ery aho.
Ny fihetsiny rehetra dia vita kajy avokoa, endrey ny hakanton’ny vehivavy manome fahasambarana tsy takatry ny saina.
Ny ratsan-tanany indray no nasolony ny molony rehefa hitany fa mando tsara, nisosasosa tsy nisy fitsaharany ny fihavin’ny tanany. Nenjaniko mafy ny hozatro rehetra, dia naveriny indray ny molony nandimby ny tanany nanampy hamandoana amin’ny fiveziveziny. Minitra maromaro no nanaovany izany.
Ny ratsan-tanako toa mahazo fy ery milalao ny volony lava, nofeheziko, indraindray aho manampy azy hampiditra ny filahiako any aminy any sady tsy nolaviny mihitsy.
Tsy aritro intsony fa nalefako teny amin’ny filahiako ny tanako, nefa nakifiny fa tiany ho izy irery no mitondra ny familiana. Dia natolotro azy manontolo ny vatako rehetra. Ny tanany nefa manome ahy onjam-pahafinaretana vaovao hatrany isaky ny mikorisa amin’ny hoditro. Ary tsy aritro intsony nony farany fa tahaka ny hisy rano miakatra te-hivoaka amiko.
Nihenjana aok’izany aho nanainga valahana ary nahazaka azy teo amboniko.
Injay fa tonga amin’ny fara-tampon’ny fahafinaretako aho sady nanokatra ny masoko tampoka. Iny nisy toraka tsirin’aina niala tamiko nifatsitsiatra in-droa ary navelany handeha faran’izay lavitra.
Nitsiky izy tao ambadiky ny volony tao sady nanoroka ny kiboko. Injay fa misy lanja tsy fanta-pihaviana mivesatra ny vatako. Fahafinaretana hafa kely, vitan’i Alexia ny nahatonga ahy, ary na dia reraka aza aho te-hanome izay valim-pitia tiako homena azy indray any amin’ny lanitra fahafito.
Nefa nitsangana izy, dia tsy niteny fa lasa niakatra tany ambony. Tsy nahavita niarina mihitsy aho fa ny torimaso no nandetika ahy tanteraka tsy hahavita ilay valim-pitia nokasaiko homena azy teo.
Tonga ny maraina.
Raha tsy nisy tara-pahazavàna teo amin’ny sisin’ny varavaran-kely nitaratra ny masoko tsy nahataitra ahy. Gagagaga, nijery ny toerana nisy ahy, tsaroako fa ato amin-dry Tahiana aho. Hay nofy mamy ilay nahazo ahy teo. Nofy tiako ho tanteraka. Raha mba teo mantsy i Alexia !
Nakipako ilay lamba norakofako, sady saika hiarina aho kanjo, tsy nisy na inona na inona teny an-koditro. Dia gaga aho, fa nisy inona tamin’ny alina?
Nahatsiarovako tantara efa niseho tamiko tany amin-dry Malala izy izany efa fotoana ela izay!
Dia sanatria ve? Vitan’izy mirahavavy ve ny hanao ahy ho….
Nitambotsitra teo ambony seza aho dia naka sento lalina. Naveriko novakiana indray ilay taratasy. Toa fantsika miletra eo amin’ny tanako izy ity. Mihazona ahy tsy hiala eo ambony hazo fijaliana. Hazo fijalian’ny asa tsy azo ialàna fa vao mikofoka dia manaintaina anaty ary mivoa-dra mitete amin’ny tany.
Loza inona ity mahazo ahy? Dia sanatria ve tsy anjarako mihitsy izany hoe hitady olon-tiana fa ny asa no ambony kokoa ?
Dray, mangidy sy mafaitra ny ankason’ny tany. Toa tolona mahery vaika sy tsy ho tanty intsony. Ary raha mahavoa mahafaty, tsy mahavoa mahafanina.
Novelomiko handeha ilay solosaina fitondra mandehandeha, dia nanomboka nanoratra taratasy iray aho. Taratasy ilazako ny fahadisoam-panantenana ato anatiko. Taratasy fametraham-pialàna izao anio izao, ary ateriko mivantana any amin’ilay Tale omaly fa fanaovana tsinontsinona ahy mihitsy izao ataon-dry zareo izao. Tsy olona tapi-dalan-kaleha aho akory, ary ny fialàko dia hananako fotoana tsara hikarakaràko ny antontan-taratasy rehetra mikasika ny fiaingako hiampita ranomasina hitady an’i Alexia sy Malala, Toky sy Cynthia.
Vao nikasa ny hanao printy ilay taratasy aho tamin’ny milina dia injay fa naneno ny findaiko. Nikiropaka aho sady nanantena antso avy any an-dafy nefa, laharana teto an-toerana ihany no teo.
Noraisiko ilay antso ary tonga dia olona fantatro feo namaly tao. - "Allo ! Hery ! i Hery ve io?"
- "Izy indrindra ity! fa ahoana izay?"
- "I Tahiana ihany ity ry Hery an! Saika hanontany anao aho mikasika ireto akanjo anaovako ireto. Adinoko ny nanontany anao hoe: ateriko rahoviana kay izy ireto handaminako ny fotoana?"
- "Hay ve izany no tianao hanontanioana ahy e! Ny valiny dia izao, tsy mitombona amin’izany mihitsy ny saiko fa ny fanaovana ny taratasy fametraham-pialàna izao dia izao no tiako hatao fa be loatra ny fanaovana tsindry hazo lena ahy ato. - "Tsy azoko," hoy indray i Tahiana tamiko.
- "Ka efa hoe fanaovan-tsinontsinona ahy mihitsy izao fa aiza ve ry Tahiana, hangataka fialan-tsasatra no nataoko alefan-dry zareo indray aho hamita iraka any Mahajanga ary miainga rahafaka ampitso dia herinandro any foana. Tsy rariny mihitsy izany. Ny fotoana hikarakarako ny antontan-taratasy rehetra aza tsy misy dia Mahajanga aho Mahajanga. Tsy raharahiako intsony izay mety ho vokany, préavis aho hoe préavis fa aleo hisy ho kefona eto."
- "Andray ry Hery ! ianao ity ve ny fo no mitondra io vatana manam-bika tsara tarehy io sa ny saina e! Dia tsy azonao mihitsy ve fa nangataka fialan-tsasatra ianao dia naleon-dry zareo nandefa anao haka rivotra kely any Mahajanga. Fa ianao ity ve adala e! Ary hoy ianao hoe rahafaka ampitso, dia azonao atao tsara ny mangataka andro tsy hiasàna hiomananao amin’ny dia. Zaranao aza misy an’izay. Fa firy aloha ny laharan’ny antso an-tariby anareo ao am-piasàna fa lany fahana eto ny findaiko mandany fotoana miresaka aminao!"
Nomeko azy ny nomerao notadiaviny dia notapahiny ny antso. Afaka minitra roa dia naneno ny telefaona teo ambony biraoko. Dia raikitra indray ny fandresen-dahatra nataon’i Tahiana. Nanazava izy fa ireo andro roa alohan’ny handehanako dia angatahiko ho andro tsy fiasàna fa natao hivezivezena hanomanana ny dia sns. Kanefa ireo andro ireo koa no hikarakarako ireo antontan-taratasy samihafa handehanako hiampita ranomasina.
Zaranao aza, hoy izy, mba misy fotoana ialànao sasatra nefa dia ny orinasa no miantoka ny lany rehetra. Raha ny foko marina no nibaiko ahy dia efa taratasy fialàna no nasetriko ilay taratasy filazana teo fa noho i Tahiana nanoro hevitra izay azo ekena ihany dia naleoko niakatra tany amin’ilay tale, sady nangataka taminy ireo andro roa voalohany mba hivezivezeko, ary indrindra mba hahafahako miantso an-dry Dadabe sy Bebe hiambina ny tranoko fa tsy hisy olona ao nefa izy ireo any ambanivohitra.
Na dia tsy ninoako loatra aza fa hanome izany ilay Tale dia tsy nisalasala akory izy fa dia nekeny avy hatrany ny fangatahako. Sady nomeny ahy avokoa ny toromarika rehetra momba ny iraka ampanaovina ahy any.
Vao niverina tao amin’ny birao aho vao nahatsiaro fa ilay resaka nangatahin’i Tahiana tamiko momba ilay akanjo tsy nasiako sira akory ka dia noraisiko ny telefaona, nalefako tany aminy ny antso ary nifanao fotoana indray izahay ny hariva fa hanatitra azy aho, sady tiany hampiana ihany koa aho amin’ny fikarakarako izay taratasy rehetra hanamboarako ny pasipaoroko.
Tonga tokoa ny hariva dia nitsena azy tao amin’ny farmasia aho, hay izy efa nitazana ahy avy eny am-baravaran-kely. Niara-nigadona teo am-baravarana izahay. Dia niaraka nankany an-tranony rehefa niresaka lava teny an-dalana mikasika ny fanangonana antontan-taratasy rehetra. Nolazainy fa manana namana polisy ao amin’ny Ministeran'ny Atintany izy afaka hikarakara haingana ny pasipaoro fa ny fanangonana ny pitsopitsony madinidinika no ela.
Vao tonga tany amin’i Tahiana aho dia hafa mihitsy ny endriky ny ati-tranony. Efitra miloko mavokely feno voninkazo artifisialy no tao. Ny fanaka tahaka ny an’ny ankizy kely tia milalao ireny. Dia nipetraka teo ambonin’ny seza lehibe izay aho sady naka ranom-boankazo mangatsika izy narosony ho ahy.
Ny fahalanian’ilay ranom-boankazo no ela dia iny izy nandray ny tohatra niakatra ary navelany irery teo aho. Naleoko ihany koa namaky izay boky sy revio samihafa teo ambony latabatra iva. Tsy nisy afatsy resa-behivavy no tao, asa tokoa, fanatsaràna tarehy, lamaody, fikarakarana vatana. Ary tena misy karazany maro tokoa. Mba ahoana marina re ny fiainan’ity Tahiana ity? Fa toa feno mistery izy izany hoy aho aneritreritra.
Ity izaho manaiky avy hatrany koa rehefa misy fanasàna ataony no tena loza.
Efa nilaza taminy mivantana aho fa tsy misy mihitsy irika ny hiarahanay roa na dia haniry nify aza ny akoho, eny e! lasa lavitra loatra kosa raha hoe haniry nify fa dia izao fotsiny efa zokiny loatra amiko raha i Tahiana ka na inona na inona fitrangany dia tsy hisary zoro aminy velively mihitsy aho.
Ny olana mianjady amiko aza efa tsy tambo isaina dia hanampy izany indray ve? Sanatria. Ny maha-irery ahy fotsiny izao no mahatonga ahy hihaona aminy, ary tsy mbola foana ny fanantenako fa anisan’ny hitondra vahaolana amin’izao Alexia lasa notsaboina any an-dafy izao izy.
Reko izy fa miantso ahy any ambony any:
- "Hery an! Avia amin’izay fa misy zavatra ampisehoako anao!"
- "Angaha ianao tsy afaka midina aty, tsy aleo ve aho aloha maka aina tsara eto dia ento aty e!"
- "An, an, an! Miakara fa tsy maninona e! angaha tsy tianao mihitsy ny hijery ny efitranoko? Izaho aza efa nitetitety ny tany aminao ka ianao indray ve no avelako irery eo. Avia moa e!" sady nanarangarana teo amin’ny tohatra izy no nanao baiko tamin’ny tanany hiantso ahy hiakatra.
Dia nitsangana aho, napetrako ilay revio novakiako teo dia niakatra tany amin’ny efitranony. Nahagaga fa tena mahafinaritra kely ilay efitranony. Manopy manga tanora izay, feno sarisary maneho ny hatsaran’ny tontolo. Ary manaitra ny maso avy hatrany ireo hoso-doko manerana ny rindrina. Ny fandriana lehibe no mibahana ny efitrano ary mifanaraka tsara amin’ny lokon’ny rindrina ny lambam-pandriana. Larimoara lehibe iray misy fitaratra no maka ny sisin-trano ilany, ary emboka manitra malefaka no manenika ny efitrano. Ny fanaka rehetra dia voalamina tsara ary tena lafatra e! Manana fitiavana be dia be ny olona matory amin’izany efitra izany. Mahatamana sy mampite-hioetra.
Dia nanatona ny sary hoso-doko iray aho sady nijery ilay sonia kely nanaraka azy. Nisy soratra kely hoe “tahianaS”. Tsy hitako izay ambara fa variana tanteraka aho. Izy nanomboka niteny vao niherika aho sady nifanonjo ny masonay.
- "Izaho no nanao sasany amin’ ireo hoso-doko ireo raha tianao ho fantatra, iny nojerenao iny izao tamin’ny tanao 2002 aho no nanao io, “fitiavana manirery” no nataoko anarany, ary ahatsiarovako zavatra nitranga tamiko vao taona vitsivitsy fotsiny izay. Dia amin’ny sary no anehoako azy."
- "Tena manan-talenta ianao ry Tahiana! Ary raha izaho manokana, dia tena diso hevitra tanteraka fa noheveriko fa karazan’ireny vehivavy manidintsidina ireny ianao fa tsy mahavita mitombina amin’ny toerana iray mihitsy. Gaga aho raha nolazain’ny tao amin’ny farmasia hoe dokotera ianao, dia izao mbola hitako fa manan-talenta sady avo lenta."
Nitsiky fotsiny izy sady nijery ahy no toa nanao fisaorana an’eritreritra tsotra dia tsotra. Nitodika izy avy eo dia naka ilay taratasy vita sora-pirinty teo ambony latabatra kely. Dia lasa nipetraka teo ambony fandriana izy no niantso ahy hanatona.
- "Ity," hoy izy, "ny listr’ireo taratasy samihafa ilainao hanaovana ny pasipaoro. Mila maka sary tapaka manakaiky be ny tarehy mihitsy, ny mpaka sary dia mahalala io tsara fa teneninao fotsiny izy hoe sary tapaka hanaovana pasipaoro. Dia ity no mety ho elaela, mitady ny karatra nanaovana fitsaràna miaramila dia entina eny amin’ny toby eny Andohalo maka ity fanamarinana voasoratra ity. Ny fanamarinam-ponenana sns e! mbola karohanao avokoa ireny." Dia nazavainy teo ny lalana tokony halehako, ary efa natorony sahady ny antontan-taratasy rehetra mety ilaina raha haka fahazahoan-dalana hivoaka any ivelany. Dia nofaranany tamin’ny hoe:
- “tsy mampaninona anao ve raha miaraka aminao aho rahampitso hikarakara ireo fa efa naka fiatoana kely aho amin’ny asako?”
- "Fa ahoana?" hoy aho somary taitra?
Tsy niteny izy fa nidaboka teo ambony fandriana dia nijery ny valin-drihana misy sarisarin-kintana marobe.
- "Asa an! Fangatahana fotsiny ange ny ahy raha tianao e! ohatran’ny mahatsiaro te hanampy anao izany aho tato ho ato fa mampalahelo ahy ianao!"
Tsy nifampiteny izahay nandritra ny minitra iray fa nihevitra izay tokony hotenenina aho. Tampoka! tsy nisalasala mihitsy aho niteny taminy he:
- "Sao dia mba mitempo fitiavana amiko kosa ary ianao ity ry Tahiana?… "
Tsy nisy valiny ilay resaka moa izaho koa ny lamosiko no nanoloana azy.
Nitodika aho nony avy eo kanjo maso manganohano no tazako. Ny molony no nokaikeriny tsy ahafahany miteny. Ary raha nifanojo ny fijerinay roa dia nilatsaka ny ranomasony nanaraka ny takolany.
- "Sssshhhuut!" hoy aho, sady nandry teo akaikiny, nofafako tamin’ny mosoara kely teo akaikikiny teo ny ranomasony, avy hatrany dia nomeko oroka malefaka izy teo amin’ny takolany.
- "Azafady Tahiana fa tsy nihevitra ny handratra anao aho tamin’ilay teniko teo. Tena mifona mihitsy fa tsy hamerina ny tahak’ireny intsony aho!"
- "Eny e!," hoy izy, raha ny tantarako no ambarako dia mbola betsaka no tsy fantatrao ary niaina ny mangidy sy mafaitra aho, ary nisy ihany koa ny nahafinaritra dia tahaka izao fotoana ahafahako manampy anao izao. Tiako ho fantatrao fa raha tena lalim-paka ny fitiavana, ny fanehoana izany voalohany indrindra dia ny famelàna ny olon-tianao hanatanteraka ny faniriany. Dia izao kasaiko hatao aminao izao. Tahaka ny hoe raha misy vorona faran’izay tianao dia ny famelàna azy hanidina no tokony hatao hiainany eny amin’ny tontolo fa tsy ny famatoranao azy ao an-tranonao na sanatria gadraina anaty vy akory."
Tampoka niarina izy no naka toerana teo amboniko. Tsy nandà mihitsy aho fa nosafoiny tamin’ny tanan-droa ny takolako dia nampidininy teny amin’ny tratrako sady notsindritsindriany malefaka. Naka fy ny vatako teo izy, tsy niteny fa ny fanotran’ny tanany ahy no narahiny maso tsara.
Te hamazivazy azy aho tamin’izay hanalàko ny sorisoriny.
- "Fantatrao ve ry Tahiana ny zavatra tiako eny aminao?"
- "mmmhhh, asa? Inona hoy ianao?"
- "Annn! …ireo nononao anankiroa ireo!"
- "Andray ry Hery! Ianao ity miteniteny foana mihitsy, izany ve dia mba filaza eo anoloan’ny vehivavy. Ianao ity an! Sady nofenjainy mafy ny takolako hanaratsy tarehy ahy."
- "Nonoko, ny nonoko! Maro ny nitsiriritra ireo hatramin’izay, tsy lahy tsy vavy, eny fa na dia i Malala aza."
- "Eny e! fa ny tiako hanontanianao anao ange dia hoe raha ny taona anananao, ahoana ny fomba ataonao mbola mampijoro tsara azy ireo fa tsy miroraka?"
- "Mbola tsy fantatrao marina fa tamin’izaho nianatra momba ny farmasia tany an-dafy dia nianatra ihany koa aho momba ny fikarakaram-batana. Izy io dia tena asa manokana mihitsy, ary fantatro avokoa ny tokony hatao na tsia mikasika ny fikolokoloana azy. Ny ahy ireo aloha dia voa-janahary fa tsy nampiana « silicones » tahaka ny fanaon’ny sasany an!"
Fa io samy manana ny toe-batany ny tsirairay, ao ny kely, ao ny antonony tsara, ao ny lehibe. Ary ny mahatonga io samihafa dia satria tsy mitovy ny tahan’ny tsirim-panentan’ny vehivavy tsirairay. Fa ny tiako hataon’ny vehivavy fotsiny dia ny hitiavany izay ananany aloha. Satria mantsy matetika dia matetika ny vehivavy dia lasa manana « complexe » amin’ny nonony.
Ka ianao koa ange lehilahy ka ahoana ary no hitantarako anao izany e! Ny anao zara raha mba loha-nono no tazana mivoitra dia ny ahy no tianao hofantarina."
Tsy aritro intsony ny nahita ireo voasary lehibe roa manoloana ahy fa dia nalefako teny ny tanako hankafy ny halemileminy ary tsaroako fa niha-nihenjana tsimoramora ny filahiako tao ambany tao.
Notohizako ihany ny nataoko ary ireo lohany kely roa mivoitra amin’ny lamba no nokitikitihiko ary nampitsikitsiky azy. Tsy ariny intsony fa nalàny ny tanako fa mangitiktika loatra hono.
Injay fa misy lakile mamoha ny varavarana any ambany any, niala teo amiko izy dia nitsangana sady lasa nangarangarana tao amin’ny tohatra.
- "I Manitra angaha izany?"
- "Hay ve indry efa ao e! dia efa lasa saina mihitsy aho fa efa nifindra lasy angamba ity rahavaviko."
Iny i Tahiana nidina tany ambany, dia nifampiresaka tao izy roa.
Niarina teo ambony fandriana aho. Zarako aza nisy izay rahavaviny izay niditra dia notapahina ilay nataonay teo sao dia ho lasa lavitra indray.
Reko miakatra any amin’ny tohatra any indray izy niantso ahy mora hoe
- "Hery an ! avia fa misy ny rahavaviko ao tiako hampahafantarina anao. Tsy maninona ve raha midina any ambany isika?"
- "Eny ary e! tsy mampaninona mihitsy."
Vehivavy somary fohifohy izay ilay rahavaviny. Mbola tanora kokoa fa hita ihany fa mbola zokiko aman-taona.
- "Izy no Hery, …, namako."
- "Faly mahalala anao, ianao no …. ?"
- "Manitra, torak’izany koa ! sady somary nitsiky izy no mbola niteny hoe hay ve ianao ilay Hery e !!!" no vao mainka izy lokilokin’ny hehy.
Dia gagagaga teo aho, i Tahiana kosa menatra be tsy nahateny mihitsy;
Asa na inona na inona no notantarain’i Tahiana fa misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy. Afaka kelikely vao nitohy ny resaka.
- "Tena faly mahafantatra anao mihitsy aho ry Hery fa hitako no… sady nodominy tamin’ny sandriny ity rahavaviny. Aza matahotra ianao fa be sangisangy izay mantsy izahay roa. Ary izahay roa irery no mipetraka ato fa monina any ambanivohitra any ny reninay ary efa tsy eto intsony ny rainay.
Izay fa ilaozako aloha ianareo fa hampirina ireto entako ireto aho." Lasa izy namonjy ny lakozia.
Asa tokoa izay ifampiresahan’izy roa, fa raha izay roa andro tsy nodian’i Tahiana an-trano izay dia tsy maintsy hametraka fanontaniana amin’ny iray. Fa na izany aza, tonga dia azoko fa efa lalim-paka ao anatin’i Tahiana ny fitiavana ahy.
Izao vao tsapako izany hoe misy olona tena tia, ary potika tanteraka amiko, izaho kosa tsy manana fo mitempo aminy mihitsy. Mety nisy ihany angamba tany aloha tany fa mety tsy sahy namboraka toy izao. Fa toa tsapako any anatiko any fa misy fo mandondona amin’ny foko nefa tsy tiako hosokafam-baravarana mihitsy. Raha ianareo ny tamin’ny toerako, sahiko ve ny hamboly fitiavana tsy misy fakany, na hamelon'afo tsy misy kitay?
Asa, izao tokoa angamba ny mahatonga ny sasany hanararoatra ny fitiavan’ny vehivavy ka indraindray mamela takaitra tsy azo afenina.
Eritrereto fa na dia ny elanelan-taonanay fotsiny aza dia tsy azoko sangiana intsony. Mbola mety hisy irika ny ahafahany mahita izay olon-tiany nefa raha araraotiko dia ho rava tanteraka izany.
Sanatria amiko, raha hanaiky izay fitiavany izay aho. Ary i Alexia no masaka ato an-tsaiko, ny hahita azy no afo mirehitra mila handoro ahy ka te hanainga handaozako tanindrazana hamonjy toerana mbola tsy nolalovako akory.
Nentin’i Tahiana niakatra tany ambony indray aho dia nosoloiny ilay akanjon’i Mama, navalony tsara.
- "ohatran’ny menatra be aho hanome anao ireto akanjo ireto amin’izao fa tokony hosasako aloha, nefa aleoko manome anao azy izao mba ahatsiarovanao ahy."
Navalony ireto akanjo sady naka harona pilasitika izy dia nataony tao.
- "ohatran’ny tena mangataka be aminao aho fa tsy mampaninona anao ve raha mba asaiko ianao misakafo aty aminay anio hariva?"
Toa nisalasala kely aho nefa nanaiky ihany, amiko koa zarako aza mba misy namana hiresahana amin’ity sorisory nahazo ahy.
- "Eny ary," hoy aho, "fa izao fotsiny, manampy anao aho hikarakara ny sakafo fa mba te-handray lakozia ihany koa aho izany!"
- "Tsy maninona mihitsy," hoy i Tahiana sady faly ery. "Andao ary hidina hikarakara ny nahandrontsika. Sady i Manitra izao efa te-hiala sasatra fa roa alina izy irery no niandry trano tato."
Dia niaraka nikarakara ny sakafonay telo izahay. Hitako tena faly mihitsy i Tahiana mahita ahy eo anilany eo. Mifanojo ny masonay roa indraindray dia mifampitsiky. Indraindray izy manoro ahy ny tokony hatao hahatsara ny nahandro. Indraindray izy toa te-hanoroka ahy mafy fa mody mifehy tena fotsiny. Raha izao no misy pitik’afo tahaka ilay tamin’ny vao maraina dia lasa efitra fandriana ity lakozia ity. Fa ny nahagaga dia nionona tamin’ny fisiako teo akaikiko teo fotsiny izy. Nisy fanontaniana nanitikitika ahy ihany koa dia ny hoe manana bika tsara sy endrika raha i Tahiana, ary manam-pahaizana ihany koa fa nahoana no tsy nahita izay sahaza azy izy hatramin’izay? Valin-teny tsotra no navaliny ahy.
- "Fatra-pifidy loatra aho ry Hery an ! Nahita fy tamin’ny fitiavana ihany koa tany am-boalohany. Rava tampoka teo iny dia lasa nanana valifaty nikotrika tamin’i Malala dia iny aho lasa nianatra tany an-dafy. Nanary dia tamin’ny fianarana. Nony tafaverina dia nitady hatrany izay mba tsaratsara amiko, nivezivezy tetsy sy teroa, voafitaka, nototofan’ny sasany fampanantenana tsara lahatra. Tsy nanam-pitiavana intsony. Dia izao."
- Aza matahotra ianao fa tsy foana ny fanantenako, hahita izay sahaza anao foana ianao. Matokia ahy fa misy hatrany any."
Afaka elaela voa vonona ny sakafo nomaninay roa. Namboarina ny latabatra. Vita dia nantsoiny i Manitra. Akanjo fohy kely hatreny amin’ny foto-pe no nanaovany, tsy menatra akory. Ny masony tsy miala aminay roa. I Tahiana amin’io te-hibedy azy nefa tsy sahy fa vao mainka aza menamenatra izany; ny sakafoko no nohaniko tsara, ny fen’i Manitra rahateo takona tao ambany latabatra tao. Resaka izany nataonay izany. Vita ny sakafo dia iny i Tahiana nitsangana nampirina ny teo ambony latabatra. Tsy navelany mihitsy aho hitsangana fa nasainy niresaka tsara tamin’i Manitra. Tafaverina avy any an-dakozia izy dia nasainy nanaraka azy aho hiakatra any ambony, iny koa i Manitra nitsangana nanaraka anay no sady nitsikitsiky…
Niezaka nanarinary dia tamin'ireo asa be miavosa mitady hanempotra ahy aho saingy tsy tafatombina ny saiko noho ilay taratasy iray monja sendra nandalo ny masoko nisy ny anaran'i ALEXIA teo ivelany. Nitambolona daholo indray ny alaheloko. Lasa tany aminy ny eritreritro rehetra. Nitsangana vetivety aho sady nijery tsara ilay antontan-taratasy nandalo teo amiko. Hafa mihitsy ilay sary nipetaka taminy, ary mbola zaza ny fijery azy. Ny taona nahaterahany voasoratra rahateo nanamarina izany.
Ndry! zazakely mahafatifaty tokoa angamba izy ity sady nitsiky aho no nanembonembona ilay olon-tiako. Any izy izay! Velona sa maty? Matoa aho tsy naharay vaovao, dia mbola manana fanatenana be aho fa ho avotra soa aman-tsara izy. I Toky sy Cynhtia ary Malala izay mbola eny ambony fiaramanidina, na efa miantsona any Paris. Miandry fa atao ahoana moa e! Raha mba afaka mifampiresaka amin’i Alexia mivantana tokoa aho mantsy dia hisy lanja mavesatra hiala ato am-babeko ato. Na dia mafy aza ny asako, dia naleoko ihany nihafy namita izany arak’izay azoko natao, ary matetika rehefa te-hivoaka hody iny ianao vao tena mihisatra tsy misy ohatr’izany ny fotoana.
Raha tsy nipaika ny tamin’ny iraika ambin’ny folo sasany atoandro vao niala teo amin’ny biraoko aho. Nivoaka ny fiasàna handeha hisakafo no fikasako, kinanjo ny làlana nankany amin’ny farmasia nisy an’i Tahiana no indro nizorako.
Narangaraniko aloha teo am-baravarana fitaratra sao dia mba mahita an'i Tahiana avy hatrany aho, saingy tsy hitako izy dia voatery niditra ihany aho sady nanontany. Nilaza ireo mpiasa tao fa i Dr. Tahiana anie tsy miasa ao am-pivarotana fa manana ny biraony manokana. Rehefa miandry raharaha ihany izy vao manampy azy ireo mivarotra, hoy ilay olona niantefan'ny fanontaniako.
Dia niantso ny tany ambony ilay mpiasa ary naniraka ankizy hitondra ahy hiakatra ary hiditra tao amin’ny misy azy. Somary sadaikatra ihany aho, toa misolantsolana tampoka amin’ny fotoana tsy ampoizina. Asa tokoa, fa teren’ny zava-misy ka tsy maintsy manao izao. Inona tokoa moa no azoko atao? Tsy an-tany tsy am-parafara! Ka izao te-hihaona mafy amin’i Tahiana izao no hitako fa mety hahitako izay mba rariny kely na dia saro-tadiavina aza.
Vao tafiditra aho dia efitra lehibe nahitana birao maromaro mitovy no hitako, samy misy solosaina avokoa. Somary nitsipalotra kely ny masoko nijery izay misy an’i Tahiana. Hay manao tablier fotsy avokoa ireo mpiasa teo. Vao tafiditra anefa aho dia nitsangana i Tahiana sady nitsiky, dia nanatona azy aho sady noraisiny ny tànako.
- "Fa angaha moa tsy efa nifankahita isika tamin’ny maraina no miverina mifampiarahaba indray."
- "Hay tokoa moa! lasalasa koa ny tànako. Fa inona no antony hitadiavanao ahy?"
- "Tsy izany fa… (toa tsy hitako izay hotenenina), … fa te-hisaotra anao be dia be aho tamin’ny nataonao ahy omaly alina. Asa, ho fisaorana anao dia te-hanasa anao aho raha afaka ianao mba hoe miara-misakafo atoandro isika izao."
- "Izao ve? Raha izao aloha dia tsy mety amiko satria fialan-tsasatra kely fotsiny no azoko atao, ary ato ihany aza aho no misakafo; indrindra fa niera kely aho nody tamin’ny maraina ka tsy maintsy mamita ny asako. Rahariva angaha tsy mety?"
- "… rahariva, fa amin’ny firy ianao no miala eto?"
(tena satriko tokoa raha izao atoandro izao, fa diso hevitra aho, tokony ho fanomezana no natolotro dia vita tany ny resaka, nefa misy tanjona tiako hahatongavana dia ny hahazoako vaovao avy amin’i Alexia sy Malala - izay rahariva izay manjary misy hevitra hanita-dàlana indray fa tiako kokoa ilay voafetran’ny fotoana atoandro dia samy miverina miasa rehefa vita ny resaka)
- "Amin’ny dimy aho no mirava, ary ianao?"
- "Afaka mandalo eto aho amin’izay ora izay fa tsy maninona."
(dray ity hadalako, dia nanaiky tokoa aho marina, tsy maintsy hisy olana indray izao ny amin’izay fa aza hitako!)
- "Eny ary," hoy i Tahiana. "Andrasako eto ianao fa aza mandiso fotoana an!" Tonga isika dia mankany amin’ilay restaurant nifankahitantsika tamin’ilay indray hariva iny. Tsy mampaninona anao?"
- "Eny e! Tsy mampaninona akory sady avelako amin’izay ianao fa hitako koa fa be asa!"
Dia nitodika aho namonjy ny varavarana, sady lasa no somary nanenina. Efa tena tsy mitombina marina ny saiko ka tsy manana fanapahan-kevitra matotra fa mpanarak’onja fotsiny dia atopatopan’ny ranomasina amin'izay tiany hametrahana ahy sisa. Dray, dray, dray! Raha tsy ho avy amin’ilay fotoana anefa izao dia ho afa-baraka! Tsoriko fa mbola manenina hatrany aho tamin’ilay fotoana nifankahitanay farany iny. Ary mino aho fa raha tsy nisy iny resaka silipo hadino iny dia mety tsy ho nisedra izao olana goavana izao akory aho.
Iny aho no namonjy toeram-pisakafoanana, niverina tao am-piasana tamin’ny iray ora atoandro, dia nanohy ny asa aman-draharaha sy variana teo. Tsy tiako ho avy mihitsy ilay amin’ny dimy ora, nefa poa tahak’izay dia nigadona ny tamin’ny efatra ora sy sasany, hiomanako hamonjy an’i Tahiana. Sady te-hiala mafy aho, nefa efa nanaiky ny ho tonga haka azy, ka atao ahoana moa.
Satriko hitantara aminareo ny nitranga raha nitsena an’i Tahiana tao amin’ny farmasia aho, saingy tantara lava ny amin'iny, fa ny tsapako dia ilay fitsiky toa maneso nataon’ilay mpandray vola nahita ahy sy Tahiana nivoaka. Asa, mihevitra zavatra hafa angamba izy! Ny amiko kosa anefa dia madio ny saiko. Marina fa nisy ilay fisaikaizàna tao anatin’ny fotoana tsy nampoizina tamin’i Tatiana, fa amiko tsy iverenako intsony iny fa nanimba ny ho avinay sy Alexia mihitsy. Ary raha ny elanelan-taona misy aminay dia tena sakana amiko tsy hahatanterahan’izany.
Teny an-dàlana dia resaka asa no nanombohany. Nanontany izay fahasalamako izy avy eo, tsy dia lavitra ny farmasia iasàny rahateo moa ilay toeram-pisakafoanana ka vetivety dia tonga tao izahay. Vao tafapetraka dia natao ny komandin-tsakafo, dia niandry izahay sady nitohy indray ny resaka.
Tsy haritro fa dia nanontany azy aho hoe:
- " Hay ve ianao ka Dokotera e?"
- "Eny" hoy izy, "maro no tsy mahafantatra fa dokotera aho ary nianatra tany an-dafy mihitsy mikasika ny farmasia. Fa ahoana no nahafantaranao izany?"
- "Sendra niantso an-telefaonina aho dia nilaza ry zareo mpiara-miasa aminao fa hoe Dr. Tahiana no misy ato."
Somary nihomehy izy sady nijery ahy.
- "Fa noheverinao fa inona aho? mpamafa trano angaha?" sady lokilokin’ny hehy izy.
- "Eny e! maro tokoa no tsy mahafantatra fa manana « doctorat en pharmacie » aho, ny antony angamba dia ny fomba fihetsiko sy ny fitafiako. Fa aleoko toy izao, sady izaho koa ange tsy miseho mivantana mivaro-panafody eo e! Zara raha hitanao iny indray alina iny fotsiny aho tamin’iny fa nanao «garde» izahay dia mba anjarako no teo."
Dia navalony teo iny resaka iny fa navadiny tamin’ny olako tamin’izay ny manaraka.
- "Fa izao e!" hoy izy, "misy olana goavana mihitsy angaha aminareo sy Ratrema no nanao ireny omaly hariva ireny ianao ity?"
- "… asa, te-hahafantatra moa ianao nefa efa mahalala ny sasantsasany amin’ny tantara, fa dia azoko ambara aminao izay hany fantatro…"
Dia notantaraiko azy tamin’ny antsipirihany izay nitranga mba hahazoako ny fony sy ny fitokisany ahy raha sendra miantso tampoka i Malala, fa izay moa no tena tanjoko.
- "Hay ve ka izany e! Dia inona izany izao no fanapahan-kevitrao?"
- "Araka ny nolazaiko taminao, dia tsy mahalala mihitsy aho izay misy an-dry zareo, na aiza na aiza. Ny fantatro fotsiny dia ny fiaramanidina …"
Raha mbola teo am-piresahana teo izahay dia indro fa tonga ny sakafo nafaranay. Nisava ny poketrany i Tahiana sady nanome ahy fanafody hafa indray.
- "Iny aloha hano, fa mahatsara anao taorian’ilay omaly, ary mitandrema amin’ny sisa fa tsy voatery ho eo foana aho akory," sady somary nananatra kely izy.
Dia nihinana izahay nony avy eo. Samy nankafý izay nafarany avy.
Teny an-tsefatsefany teny dia nolazaiko azy fa tahaka ny vorona voafatotra aho ka tsy afaka hamonjy ilay tiany. Ny asa mangeja ahy, ny ranomasina mbola tsy niampitako mihitsy, nefa tena fahabangàna faran’izay lehibe amiko ny tsy mahita an’i Alexia; ary tsy mahalala akory izay vaovao nefa olona marary miady aman’aina no nahitako azy farany.
Saika tsy zakako intsony ny alahelo tao am-poko fa nanganohano ny masoko ary niondrika aho ka ny handriko no natohoko ny moron-databatra.
- "Tsy aleo ve," hoy i Tahiana, "tohizana any an-tranonao ity resatsika ity fa manjary hojerijeren’ny olona eto isika?" Sady niantso ilay «serveuse» izy nampanao ny fitambaram-bola.
Sadaikatra tampoka aho, sady nitraka, ny masoko lasa mena vetivety teo. Fa inona indray ity? Tsy ny tahak’izao ihany ve no nandavo ahy tamin’ny farany?
Tsy hitako izay natao fa naleoko nanaiky tsy sazoka, izy rahateo nitsangana nandoa ny vola fa navelany irery teo amin’ny latabatra teo aho. Nitsangana koa aho nanaraka azy dia nilaza fa tokony ho izaho no nandoa ny lany satria izaho no nanasa. Novaliany anefa fa izaho hono no mandoa ny fiarakaretsaka mody.
Dia iny izahay nandray fiara nody tany amiko. Tsy nisy nifampiresaka teny an-dàlana. Asa izay tany an-tsainy tany, fa izaho kosa nanahy ny hiafaran’ity alina ity. Dia ho sahiko ve ny hiroboka ao anaty rano lalina efa tena nanafotra ahy?
Asa, fa zara aza mba misy namana hiresahana sy mahalala ary mahatsapa ny adin-tsaiko. Efa niha-maizina ny andro vao tonga tao an-trano izahay. Novohaiko ny trano dia nampandrosoako izy ary nasaiko nipetraka.
Tsy vita akory izay dia injay fa naneno ny findain’i Tahiana tany anaty poketrany tany. Navoakany sy nojereny aloha dia novaliany. Ary lasa izy nivoaka tany antokontany nifampiresaka tamin’ilay mpiantso.
Niontana ny foko. Enga anie ka i Malala izay. Narahiko moramora izy avy ao aoriana nefa toa nitsoaka ahy. Asa! Toa tsy fahalalam-pomba be izany ataoko izany? May tsinona aho ka!
Niverina teo an-tokonana aho niandry azy.
Tsy niteny izy nony avy eo, tsy nivolana fa tsiky zary tenany no natolony ahy.
Tsss! aza manonofy marina letsy ry Hery fa raha te-hatory dia fotoana fanaovana izany izao a! Niditra tao antrano izahay nony avy eo.
Vao tafiditra kelikely anefa izahay dia injay fa nitraotrao be ny orana tao ivelany tao, tsy nifandrenesana teo an-tokontany. Nakatoko ny varavarana sady nanidy izay varavaran-kely rehetra aho.
Dia notohizako ny resakay:
- "Asa raha fantatrao fa tsy misy andrasako izao afa-tsy ny antso avy amin’i Malala. Koa raha sendra miantso anao izy dia azonao atao ve ny milaza amiko izay misy azy? Sa izy ilay niantso anao teo?"
- "Tsss! fa ahoana koa no itenenanao izany? Eny e! Fantatro ny ahiahinao! Jereo izato ianao tahaka ny akoholahy voakapoka. Fa mikasika ilay hoe handehananao any an-dafy hitady an’i Alexia. Ianao milaza fa ny havanareo any tsy dia mifandray aminareo akory, dia aiza ihany koa moa no alehanao nefa ny misy azy ireo aza tsy fantatrao? Fa angaha heverinao fa tahaka an’Antananarivo i Paris ka hoe ho hitako atsy amin’ny hopitaly HJRA na HOMI Soavinandriana ry zareo? Dia jereo ihany koa, ianao ihany no milaza fa tsy azo avela ny asanao! Raha izany ianao dia tokony hametra-pialàna, kanefa mety hangataka onitra be aminao ny teoram-piasàna, ary na ny taratasy hanomananao ny dia aza ange tsy ho vita vetivety e! Volabe mihitsy no ilainao vao afaka mahazo <<visa>> ho an'ny fizahantany ianao; ankoatr'izany ny fampiantranoana, ny hotely, ny fivezivezena! Dia efa tafaverina eto ry Alexia vao afaka handeha ianao, nefa ny asa navotsitra, ny vola lany hatakalo Euro. Ary ianao ve mihevitra fa tsy nisy akony tamin-dry zareo iny nataonao teny Ivato iny? Asio fiheverana ihany ry Hery ny ho avy fa aza manao hevitra bontolo fotsiny a! Raha teo amin’ny toeranao aho aloha dia aleoko miandry e!"
Tena azoko amin’izay fa i Malala no niantso an’ikala ity teo. Tsy maintsy ataoko fantatra androany alina ihany izany…
- "Aleo aho aloha hikaroka izay azoko haroso anao fa ilaozako miresa-be eto fotsiny."
Dia iny aho nitady ranom-boankazo tao anaty vata fampangatsiahana. Hay narahiny tsimoramora aho sady nofeheziny tamin’ny tànany ny kiboko sady namaha ny bokotry ny lobako izy. Ny tànany ilany nakariny ambony nisafo ny tratrako; ny ilany indray nidina ambanin’ny foitra sy nitsofoka tany anaty patalohako. Tsy nahahetsika aho aloha. Ny hatsiaka no tsaroako nivoaka avy tamin’ilay vata, nefa ny hafanan'ny tànany no niaro ahy, ny jiro avy ao anatiny nanazava ity tànany efa mikaroka ireo loha-nonoko kely. Efa fantatro fa tsy maintsy hanao izao i Tahiana. Satriko ve hotohizana, sa hoteneniko izy hijanona?!
Raha ny nofoko no mitondra ahy dia hobataiko izy ary hampandriako eo ambony taila fotsin’ny lakozia ary hanaparako ny filàko rehetra sy hanalako ny sorisoriko. Fa raha ny foko sy ny saiko ny mibaiko ahy, dia asaiko hajanona avokoa izao ataony izao, ary hotantaraiko azy fa anisan’ny nahatonga izao rehetra izao ilay nataonay farany iny. Dia sanatria ve ho sahiko ny handetika kokoa ny fantsika efa mandratra ny foko? Vaka teo ny saiko.
Tsapako amin'ny hoditro ny hafanan'ny tànany, midina manafosafo moramora ny ambany foitrako. Vao nahakasika kely ireo volo madinika fotsiny ny ratsan-tànany dia injay fa reko miha-mihenjana ny filahiako. Mitombo ny filàko hitady firaisana ara-nofo aminy. Toa tsy haiko hajanona fa ireo nonony roa no tena reko mitohaka ao an-damosiko. Tiako be ilay safosafo nataony. Nampiany oroka malefaka tao amin'ny hatoko rahateo koa moa.
Raha nihena ny hevitro hampijanona izao ataony ahy izao, dia ny filàna tao anatiko kosa toa nitombo sady te-hihazakazaka handrifatra tsy ho tanako intsony. Nisento kely aho dia nihodina, ny tànany lasa namonjy ny lamosiko indray ary namihina ahy... nefa: somary natosiko izy hanalavitra kely fotsiny mba hisian'ny elanelana taminay.
- "Tahiana a!", hoy aho, fantatro ny tianao hahatongavana fa misy zavatra tiako horesahiana aminao.
- "Inona?" hoy izy somary niangoty kely sady niezaka ny nandroso hananika ny molotro fa tsy navelako.
- "Asa raha fantatrao fa tamin'ilay isika nanao tahak'izao ilay indray hariva iny... dia fantatr'i Alexia ny farany ka izay no lasa ady saritaka taminay roa ary mbola tsy voavaha akory hatramin'izao."
Najanony ny fihetsiny rehetra, novahany ny tànany dia nobanjininy tsara aho.
- "Tsy azoko," hoy izy, "fa ahoana no nahatonga anao hiteny izany?"
- "Izao fotsiny e! Tsy mandà ilay fanampianao ahy aho hatramin'ny omaly, ary mbola tsy ampy aza ny fisaorako anao... fa noho ilay silipo adinonao tato an-trano dia tsoriko fa tsy te-hanao firaisana aminao intsony aho."
- "Fa maninona anefa no tsy noteneninao ahy hatramin'izay izany? Sao heverinao fa tsy mbola hitako tao anaty "douche"-nao ilay izy tamin'ny maraina teo? ary izaho aza nihevitra fa matoa mbola sahinao notehirizina tao iny dia nisy fahafinaretana hafa nataonao taminy?" Niaka-peo tampoka ny anao vavy! Asa, tsy tiako be ny fiteniny. Tsy hitako intsony izay havaly azy fa nahavita nikarokaroka izy matoa nahita ilay izy. Ary saika hadinoko akory aza ny toeran'iny silipo mainty iny taorian'ny nahitàn'i Alexia azy.
-"Tu me dégoutes!", sady nalainy ny poketrany no lasa izy namonjy ny varavarana.
Vao nisokatra anefa, mbola oram-be nivatravatra no tao ivelany tao. Nosokafany ny poketrany, tsy nahita elo. Avy hatrany izy dia nivoaka sy nitsotsotsotso tany an-tokontany efa difotry ny ranon'orana.
Taitra aho nahita azy lasa tampoka tsy natahotra ity oram-baratra.
Nihazakazaka koa aho nanenjika azy teny am-bavahady. Loza ity! Sahiny ve ny ny hanao izao? Na dia olona adala aza angamba tsy hihevitra ny hivoaka tsy manana elo hialofana akory. Ny andro alina, ny riaka eny an-dàlana aza mety hahazaka olona....
Iny izy saika hamoha ny vavahady iny no nosintomiko hanaraka ahy hiverina. Vetivety vonton'ny rano hatramin'ny atin'akanjoko. Ary fantatro fa tahak'izay ihany koa ny azy. Nosarihiko mafy fa tsy nety nandeha, hany heriko dia nanao an-katerena azy, ny feny roa sy ny lamosiny no nobataiko, namaly mafy ahy hatrany izy arak'izay azony natao. Ny tànany nidarodaroka ny lamosiko fa nihafiako ambara pahatongako tao an-trano.
Vao tafiditra dia napetrako teo ambony seza lava. Hotsaka tanteraka izahay roa. Izy etsy toa mangovingovitra, ny valanondranony manakotsako ao anatin'ny hamandoana. Loza inona indray ity hiseho marina! Tsy hitako izay hatao, hany hevitro dia nibata azy indray ka nitondra azy niakatra tao amin'ny efitranoko. Tsapako fa nangatsiaka be izy hatrany anatiny any. Napetrako teo ambony fandriana ary naka lamba famafàna aho tao anaty larimoara, ary iny no namafako ny volony. Dia novahako ilay akanjo lava efa honaky ny orana dia nosintoniko hidina hanalàna azy. Nanaiky tsy sazoka fotsiny izy fa tsy niteny. Ny vatany iray manontolo mbola nangovitra be. Ireo atin'akanjo sisa teny amino, nefa mbola tena hotsaka ihany koa. Vao nalako ilay tadin'ny tati-nono dia fetaka teha-maina no nifatratra tamin'ny tarehiko. Dia niala aho sady nanolotra azy ilay lamba famafàna. Nefa izy aza tsy nahavita hetsika intsony fa vizana tanteraka. Niverina teo aminy aho sady nanamaina ny vatany. Dia nakipako ny lambam-pandriana dia narakotro azy. Nitsangana aho naka izay akanjoko maina dia nidina tany ambany nisolo ny teny an-koditro ary namàna rano tamin'ny fatana. Niverina indray nijery azy efa mibonoka tao anaty lamba. Navoaka ny bodofotsy sy ny akanjo maina afaka nomeko azy. Ny masony fotsiny no mipitrapitra nanezaka nanala izay atin'akanjo teny aminy, kanefa naleoko nihodina tsy nijery azy akory. Sady lasa aho nidina tany ambany.
Vetivety dia vita ny rano mafana, nataoko tao anaty tavoahangy. Ny ravim-boafotsy mbola mivaivay no nentiko hosotroiny. Nosokafako avy any ambany ny lamba dia natsofoko ilay tavoahangy feno rano hitondra hafanana ny manodidina ny tongony. Nareniko izy avy eo ary nampiako hanidy ny bokotr'ilay akanjo nomeko azy. Dia nasaiko nisotro ilay ranon-dravim-boafotsy efa nomaniko ho azy izy. Tsy nisy nifampiteny izahay efa ho minitra maromaro.
Tsy aritro intsony fa hoy aho:
- "Ataoko angamba fa tsy maintsy matory atý indray ianao anio alina. Tsy maninona fa atsy amin'i efitr'i Mamanay aho no hatory fa aleo ianao mijanona eo! Ao ambadika ao aho raha misy ilànao ahy." Sady narehitro ilay jiro kely teo andoham-pandriana dia lasa aho nankao amin'ny efitra ilany nanomana izay hatoriako.
Loza izany! omaly, izy no namonjy hay; izao indray, izaho no voatery mamonjy azy. Nidina indray aho nisotro ihany koa ny rano entiko hanala ny hatsiaka rehetra tany anatiko tany, tsy ho tantiko mihitsy ny hahazo aretina amin'izao fotoana izao.
Navoakako daholo ny zavatra rehetra tao anaty poketrany fa sao nisy tsy mahatanty hamandoana. Gaga ihany aho fa nahita ny anarako tamin'ny taratasy iray sady misy ny laharan'ny findaiko. Nojereko indray ny laharana farany tamin'ny antso voaray tamin’ny findainy, laharana lavabe tsy tahaka ny mahazatra fa antso avy tany ivelany. Toa mifono zavatra maromaro mila hazavaina amin'ity Tahiana ity. Dia naparitako teo ambony latabatra kely ireo zavatra rehetra tao anaty poketrany, hanamaina ireo taratasy hafa tao.
Mbola nandamina ilay fandrinan'i Neny aho sady nampirina ny efitrano ka afaka adiny iray vao niverina tao amin'ny efitra nisy an'i Tahiana. Hay efa matory izy noho ny havizanana nanjo azy. Dia nalaiko avokoa ny akanjony lena be teo ka nahahako tao amin'ny efitrano fandroana.
Saika tsy nahita tory aho iny alina iny. Marobe ireo zavatra mifamahofaho ao an-tsaiko. Alexia, Malala, Toky, Cynthia, Ratrema, ny asa tsy ho tanty intsony ary tsy azo ialàna, dia miampy ity olana vaovao ity indray, Tahiana!
Handeha hitady an'i Alexia aho ve? Ary any amin'ity Tahiana ity ve ny vahaolana amin'izao tranga misy ahy izao? Asa hoy aho fa dia aleo ny ampitso no hanambara.
Tsy nopizinin-tory aho iny alina iny; vao mba renoka kely dia taitra indray. Farafara natorian’i Neny rahateo ity misy ahy, ka nahatsiaro sy manembonembona azy tsy hita be ihany aho! Hany ka raha vao nandre ny feom-boron-kely voalohany aho ny maraindraina dia tafarina teo am-pandriana. Novohaiko moramora ny varavaran-kely, dia nidina tany ambany aho. Nosokafako avokoa izay rehetra varavarana, na kely na lehibe, hidiran’ny rivotra vaovao. Nivoaka teny an-tokontany aho nony avy eo mba haka rivotra madio. Nahafinaritra ahy ny nihaino ireo siokam-boronkely mikalo ny hatsaran’ny tontolo manodidina. Tanàna somary lavitra ny arabe moa ny tranonay, kanefa tongan’ny fiara soa aman-tsara. Mangina dia mangina ny tontolo, mamela ireo voronkely hikalo fitiavana tsy mety ritra rehefa niharitra ny ora-mikija nandritra ny alina.
Fanaoko ny mihazakazaka vao maraina manodidina ny tambohonay sady mijery izay simban’ny orana tamin’ny alina, na ny ivelan’ny trano izany na ireo hazo fihinam-boa manodidina. Vita izay dia nanatanjan-tena teo amin’ilay vy mahazaka izay aho, nanabokona ny sandriko sy manenjana ny hozatro rehetra.
Teo am-panaovana izany indrindra aho no injay fa misy hira mandeha amin’ny onjam-peo avy ao amin’ny lakozian’ny mpifanolo-bodirindrina amiko.
Fantatro tsara ilay izy, na dia malefaka dia malefaka aza ny fandrenesako azy.
Hiran’i «Joe Dassin», «l’été indien» no lohateniny. Mampahatsiahy ahy zavatra marobe niainanay sy Alexia herintaona lasa izay:
«…c’est comme si j’y étais… je pense à toi!…
où es-tu? que fais tu?
Est-ce que j’existe encore pour toi…
Nentin’ny feon-kira teo aho, tahaka ny misy fanamafisam-peo mandefa azy mafy ato an-tsaiko. Any izay i Alexia! Tsy noraharahiako izay fitarainan’ny sandriko efa mila tsy hahazaka ny vatako manatanja-tena intsony!
Ny feon'i Tahiana niantso ahy avy any aoriana no nanaitra sady nampijanona ahy. Io izy mijoro eo anoloan'ny tokonam-baravarana. Somary takon’ny haizina kely ny lohany, ary ilay lobaka lava nomeko azy alina no teny an-kodiny. Somary tery taminy ilay izy fa mifandrirodrirotra be ihany ireo bokotra manoloana ny nonony. Loba-dehilahy rahateo koa moa tsinona, izay no hany hitako azo natafy azy. Haka ny akanjon’i Neny ve? tsss. Toa ireny fiankanjo miantsy lehilahy ireny no fahitako azy, ka naleoko indray nihodina tsy nijery azy fa ilay fonjam-by kely no nalaiko nampiakariko sy nampidiniko tamin’ny sandriko. Notohiziny ihany ny resany na dia nomeko lamosina aza izy:
- "17 taona aho tamin’izay", hoy i Tahiana nanomboka ny resany, "ary i Malala vao nandray ny faha-18. Mpinamana tsy nifankafoy, niray dabilio tany am-pianarana. Nifanampy sy nifanoro tamin’ny zavatra rehetra. Nifanaiky fa hifampitantara ireo tsiambaratelonay na ny soa na ny ratsy. Tany aminy aho indray asabotsy hariva, tsy dia be teny izy fa nitsapatsapa ny tao ambany kibony tao. Zipo fohifohy izay no nanaovako ary tsy nisalasala izy niteny tamiko hoe: « asehoy ny zavatr’indry fa misy tiako hojerena… » ! Gaga be aho tamin’izay, tsy natahotra aho akory satria efa nanao fampitahana aza izahay volana vitsivitsy izay fa samy mbola virjiny. Tadidiko tsara fa avy nianatra momba ny biolojian’ny fananahana izahay tany am-pianarana; dia liana erý, ary nitsiry taminay ny te-hahalala sy te-hahita mivantana ny taova rehetra mikasika izany. Izy aza nahatsapa fa misy tranga mahafinaritra rehefa nanafosafo io fivaviany io izy elaela. Notantarainy tamiko daholo izany, ary nataony teo imasoko aza fa tsy nampiraika ahy akory. Nanatona ahy izy sady ningainy ny zipoko no nosintominy ny atin’akanjoko. Hafahafa tamiko ny fihetsiny! Toa lasa menatra aho!
- "Fa maninona?" hoy aho, somary tezitra, raha misy miditra tampoka eo dia ahoana?"
- "Nanao tamin’i A… aho omaly hariva. Mbola misy maharary ahy hatramin’izao rehefa voakitika eto. Tiako hampitahaina indray ilay fiovàna fa tena maharary ahy." Sady natsindriny ny fivaviany indray ny tànany no naka fitaratra kely izy. Novahany ny bokotra marobe tamin’ny akanjony, nalatsany ny atiny. Nojereko tsara ny fihetsiny dia nanatona ny fandriana nisy ahy izy sady notarafiny ny maha-vehivavy azy. Iny koa aho nijery fa mba liana te-hahita. Fivaviana efa niala volo no hitako, ny molony ambany roa tahaka ny nihitatra tsy mitovy amin’ny ahy, ary hita tsara ilay zohy itoeran’ny fahasambarana miendrika haram-bato malemilemy. Tsy handriko intsony fa hoy aho:
- "tantarao akia ny nahazo an-dry a!" somary nanenina. Tahaka ny nanao fifaninanana mantsy izahay momba io resaka io kay i Malala no nisantatra azy.
Dia notantarainy tamiko ny tanaon’izy sy A…
Asa anefa izay nahazo ahy fa isaky ny mitantara izao sy izao izy, dia lasa nisy fahasarotam-piaro be izany tany an-tsaiko tany. Noho izaho voasongony ve, izaho anefa aza mbola tsy ampy taona akory tamin’izay sa inona? Indraindray izy lasa mirehareha, indraindray toa manenina. Hitako teny amin’ny endriny rehefa mitantara fa maharary azy ilay izy ka dia nomeko safosafo sy orokoroka teny amin’ny takolany izy mba ho mariky ny fiarahako mizaka izay mahazo azy. Kanjo, tsy fantatro ary mbola tsy azoko fantarina hatramin’izao, fa nifanatona ny molotray roa, izy rahateo tsy nandà. Ary toa satrinay notohizana aza. Oroka malefaka tsy tahaka ny an’ny lehilahy, nanisy lokomena koa moa izy ka asa, izay angamba no nahahafa azy. Nalefany teny amin’ny nonoko ny tànany, nosafosafoiny mora, lasa nifamihina mafy izahay ary samy nankafý tsy te-hijanona mihitsy. Ny bokotry ny ankanjony efa tapitra nivaha, novonjeko nosafoina koa ny nonony roa sady nopolipolesiko ireo lohanonony kely.
Tsy nisy nifampiteny izahay, nampidiniko ny molotro namonjy ny tendany, namonjy ny loha-nonony iray, nahafinaritra azy ny nataoko fa ny voloko no nosafosafoiny toa nobangoiny tamin’ny ratsan-tànany. Tahaka ny nolalaoviko sy noketoketohiko mora tamin’ny molotro roa ny loha-nonony; nitsapatsapa zavatra maro mbola tsy nataoko aho fa toa nisy hery miafina izany nampifandray anay roa. Ary samy tianay tsy hay najanona. Fahafinaretana be ho ahy ny nanorokoroka azy; asa! tsy te-hiala mihitsy aho raha tsy nitsilany izy natory. Ny tànany avy eo nanafosafo moramora ny fivaviany, ary ny ilany kosa nisarika ny saokako hifanoroka taminy indray. Dia niverina indray ilay onjam-panorohana lavabe, ny lela nifampitady sy nifampita hafatra amin’ity fahasambarana mbola tsy niainanay mihitsy. Notadiaviny ny fela-tànako dia napetany teo amin’ny vivaviany. Fivaviana malama, tsapa avy hatrany ny lefaky ny hodiny ivoahan’ny hafanana kely. Hafanana mahafinaritra, ny ratsan-tànako nefa mila hivaivay. Ny fanondroko roa no nahatsapa fa misy mando teo aminy, natsofoko kely nampisaraka ireo molotra roa. Toa nimenomenona kely izy fa navelany notohizako ihany. Narosoko, nahemotro ny ratsan-tànako, injay fa nitombo hatrany ny hamandoany. Nifangaro tamin’i Malala ny fahafinaretana sy ny fanaintainana, fa mbola tsapako hoe reny maharary azy ny fivaviany nefa tobasan’ity tànako fahafinaretana hafa kely. Tànam-behivavy malefaka mbola tsy nanaitra ny tsirim-panentanany tahaka izao.
- "Avia amin’izay," hoy izy, "soloy amin’ny lelan-dry amin’izay ny fanondron-dry fa nataon’i A… an’izay aho omaly. Tiako mbola hiverina ilay fahafinaretako talohan’ny nidirany tamiko."
Tsy nandà mihitsy aho, te-hahalala izay vokany. Reko koa tany anatiko tany fa misy onja miakatra manenika ahy. Nosokafany tsara ny feny, niomana handray ahy, nojereko indray ny endriky ny fivaviany, nosafoiko tamin’ny tànako farany dia niondrika aho nampikasika ny lelako taminy. Nilomano tao anatin’ny hafanan’ny elakela-pen’i Malala ny tarehiko. Naka ny tsirony izay tsy noraharahiako fa ny fiaingan’ny andilany no tsapako isaky ny mandalo teo amin’ny bokotry ny fahafinaretany aho. Tsy fantatro intsony izay nataoko, elalela kely, ny lelako efa tsapako miha-vizana mivezivezy eo aminy, ny molotro roa indray no nampiako hisintontsintona ireo molotry ny fivaviany sy ny bokotra kely teo aminy. Tsapako amin’izay ny tànany manindry mafy ny lohako nefa ny valahany miainga miala ny fandriana.
"Mmmmhhhhhhooouuuuiiii!!!" hoy i Malala tamin’izay sady ningainy ny tarehiko hijery azy.
- " mmhhh, tonga!!!" sady nisento izy no nidaboka tsy nahatsiaro izay ambonin’ny tany intsony. Ny hany azoko natao dia namonjy azy sy nanoroka indray ny molony. Ary tsy taitra tamin’ny lanitra nisy azy teo izy raha tsy nanafosafo ny nonony indray aho.
Nanana vahana foana i Malala teo alohako, izy hatrany no nisantatra ny zavatra rehetra, izaho kosa nanaraka azy teny akaikiny teny."
- "Tsy azoko," hoy aho, "fiainanao sy Malala izany! Inona loatra moa no idirako amin’izany tantara izany? Ary tsy fantatrao angaha, fa ny fiarahan’ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy, amiko, dia mbola tsy eken'ny saiko loatra?"
- "Aza mbola misendoatra aloha ianao," hoy i Tahiana, "fa tsy mbola tapitra eo ny tantara".
- "Teo dia reko fa misy filàna tsy haiko notanana intsony. Te-hahazo ilay fahafinaretana nomeko an’i Malala teo aho, famerim-bolako tsy maintsy notakiako taminy izay. Hitany ny ratsan-tànako milalao ny ahy. Tamin’izay vao tena tsapako izany hoe “excitée” izany, ary tahaka ny onjam-pahasambarana izany no miakatra avy tany anaty kiboko tany, izay tsy haiko fefena tsy hivoaka. Tsy nisy nifampiteny akory izahay, fa avy izy nanoroka ahy nanomboka teo amin’ny molotro hatrany amin’ny fivaviako. Nangitikitika ahy ny safosafony, tiako be ny kaikitry ny molony, toy ny rivotra mitsoka manafotra ahy ny fofon’ainy sy ny hafanan’ny lelany mikaroka ny fahasambarako tsy hay notohaina. Injay fa nananika ahy ny fara-tampony. Ilay lambam-pandriana no nosarangitiko mafy. Tampoka teo, navelako hidaboka avokoa ny ratsam-batako rehetra, vizana, nitolefika tsy naharay lamba intsony. Sady faly i Malala no nitsiky… kanefa tamin’izay fotoana izay no niditra tampoka tao an’efitra i Vololona ary saika tantara lavitra be no nitranga, fa nifompona mafy taminy izahay fa tsy hamerina intsony."
- "Dia ahoana?" hoy aho somary liana amin’ity tantarany ity. "Mbola namerina indray izany ianareo roa taty aoriana?" sady nitodika tany aminy aho nijery azy.
- "an, an! tsy nanao izany intsony izahay na dia fantatray fa hafa noho ny hafa aza ny fahasambarana niainanay tamin’izay. Nefa tsy tianay ny antsoin’ny namana sy ny mpiara-mianatra hoe ireny ange ka izao sy izao. Dia naleonay tsy nanao izany intsony sady i Vololona nanara-maso anay hatrany fa raha vao mbola reny na hitany fa mbola manao izany dia halazany amin’ny ray aman-dreninay."
- "Fa mbola tsy azoko ange ny tianao hahatongavana e! Inona marina no antony hitantaranao izany?"
- "Telo taona tatý aoriana, efa samy nanao izahay roa, samy nitia ny azy, samy nifamboraka izay fanandramana nataony avy. Nahita lehilahy iray, izay tena nanana ny bika aman’endrika izay aho. Tena tiako ilay izy ary tia ahy koa. Nahatsiaro nanana fahasambarana sy fahafenoana aho tamin’izay lehilahy izay. Tamin’ny lafiny rehetra mihitsy, ary tsapako fa izay lehilahy izay no hitantana ahy hiatrika ny ho aviko. Asa izay nahazo an’i Malala, satria moa izahay nifanaiky fa hifamboraka izay samy tsiambaratelony, dia notantaraiko taminy ny fiainanay sy L… Nolazaiko taminy ny fahafaham-poko rehetra, ny nataonay na dia ny fiainana ara-pananahana izay fantatro fa tena tsiambaratelo tsy azo ambara an’iza na iza aza. Inona hoy ianao ny nataon’i Malala, hainy ny nandangolango an’i L… Lasany tamin’ny fotoana tsy nampoizina, ary ny tena loza dia izao: notantarainy tamin’i L… ilay tantaranay teo. Nisafoaka ny anao lahy, tsy mety aminy hono izany vehivavy tia vehivavy izany. Dia rava hatreo ny fahasambarako rehetra. Rava noho i Malala."
Nikaroka izay mba mitovy tamin’i L… aho hatramin’izay, nivezivezy tetsy sy teroa, fa hafa ihany i L… I Malala moa iny hitanao fa nanambady an-dRatrema iny. Izaho eto izao, tsy an-tany tsy am-parafara. Tsy took, tsy forohana!
Te-hamaly faty an’i Malala aho hatramin’izay, nefa namako izy, noraisiko ho tahaka ny rahavaviko akaiky. Dia naleoko mihitsy niala teto Madagasikara nianatra momba ny farmasia tany an-dafy. Koa aza gaga ianao amin’i Malala, fa toetrany mihitsy ny tsy mahatàna tsiambaratelo. Izay no nahafantarako tsara anao. Fantatro fa tsy zanak’i Ratrema akory i Toky fa zanakao. Efa notantarainy ahy ny firaisanareo voalohany. Ny sangim-pitia naharevo anareo roa. Tsy handriko mihitsy ny nifankahitana taminao hanatanterahako ny valifatiko. Nefa izao…"
- "Nefa izao ahoana?" hoy aho, sady nanatona nipetraka teo akaikiko izy nanodina ny tànany teo amin’ny valahako; niondana vetivety teo amin’ny soroko.
- "Nefa izao hitako amin’izay ilay L… nandao ahy fahiny noho i Malala. Tiako haveriny amiko satria efa eto akaikiko izy. Nefa ny fony mbola any amin’i Malala ihany." Sady nisy tsoria-dranomaso niala taminy…
- "Tahiana!" hoy aho, "fantatrao tsara fa fitiavana tsy hisy mandrakizay izany antsika izany. Tsy i Malala akory no andrian’ny foko fa tena i Alexia, ary izy avokoa no ivon’ny fiainako rehetra. Fantatrao tsara i Malala, fa ny ara-nofo no mahamay azy."
- "Eny e! fantatro tsara," hoy Tahiana, "fa na dia sombitsombin’ny fitiavanao fotsiny aza no atolotrao ahy, ary farananao ao anatin’ny fotoana fohy dia ampy ho ahy hanadinoako ny fitiavako an’i L… izay mibahana ato an-tsaiko. Ary tiako haverin’i Malala amiko amin’izay izay nalainy tamiko."
- "Andao," hoy i Tahiana, "viens, viens me donner ce que je veux vraiment, viens..." Sady nosarihiny aho hiakatra tany amin’ny efitranoko.
- "Avia," hoy i Tahiana, "avia fa mila anao aho."
Nitsambikina kely izy nidaboka teo ambony fandriana. Toy ireny zaza milalao falifaly erý ampitsambikinin’ny vy miaina ireny. Ilay tantara nataony teo koa tsy laviko fa nanaitra ahy fa mody nafeniko, atao ahoana fa lehilahy ny tena. Izao ilay hoe boky mivelatra feno sary ve tsy ho vakiana? Saingy ny sary nameno ny takilany tsy fampiseho masoandro akory fa afenina mafy dia mafy sao misy mahita. Izy aloha dia bikan'olona e! Raha ianareo angamba no tamin’ny toerako, dia minoa marimarina fa na tsangambato aza mety hihetsika hitolona azy.
- "Avia moa Hery a! Hery chéri…" sady miangotingoty no sady manafosafo ny vatany manomboka any ambany ka hatreny amin’ny nonony, ny masony tsy miala teny amiko, hitako tsy voasaron’ilay lobaka intsony ny faritra ilan’ny foto-peny, nanomboka novahany tsimoramora ny bokotr’ilay lobaka efa nanery ny nonony tsy manam-paharoa. Dia izay no tena nanetsika ny fihenjanan’i balita tao amiko tao. Nefa tsy sahiko nokitihana akory.
Lasa nirehitra sy niredareda tao anatiko ny faniriana. Faniriana te hanome tsotr’izao, ary hitady fahasambarana ihany koa. Faniriana ny te-hamaly ilay voa-drà teo amin’ny nonon’i Malala vao andro vitsivitsy lasa izay.
Teo amorom-pandriana aho no nijoro, nijery ity fihetsiny manafosafo ny vatany. Ny tahak’izao no tsy mba tantiko mihitsy amin’ny vehivavy, fa dia avy hatrany aho dia roboka, te hitady fahasambarana tsy hay tohaina na inona na inona fitrangany eo. Ny tànany havia no nanainga ilay lobaka avy any ambany dia nanomboka nikitika ilay fivaviany. Ny havanana kosa nanakatra ahy sady nisarika, toa manao baiko moana hoe "avia hiara-handry amiko!"
Dia nandry teo akaikiny aho, niorirana kely izy dia nifanatrika izahay. Ilay tànany mbola manafosafo mora ilay fivaviany ihany, ny ilany kosa nampidiriny tany amiko hikaroka ilay filahiako efa mafy tahaka ny hazo voamboana.
Natoniko ny molony ary ny tànako ilany nalefako hitsapa ilay nono efa niseho teo anatrehako. Nifanoroka izahay, injay fa ny lelany no nikaroka sy nanome hafanana ny ati-vavako. Nakorisako kely ny molotro hanakaiky ny sofiny. Dia nobitsihiko mora izy hoe:
- "Inona no tadiavinao amiko?"
- "Mmmhhhh, ny fanafahana ahy, fanafahana amin’ny gejan’ny fitadiavana ilay tsara indrindra. Omeo ahy fa fantatro fa anananao be dia be. Omeo ahy izao ilay nangalarin’i Malala tamiko hatramin’izay."
- "Tsy azoko," hoy aho, ny molotro amin'io efa maka ny fofon’ny volony sy ny hatony. Fofona natoraly, fofony nampientana ny faniriako rehetra.
- "Hazavaiko anao rehefa avy eo, fa avia, vokiso ny fitiavana aho hahatsapako ilay tena fahasambarana."
Nomeny ahy ny azy iray manontolo, anjarako sisa ny mitolona azy, izy ilay mitady ny faratampon’ny fahasambarana mbola katsahiny.
Tamin’ny fihetsika haingana no nanalako ny patalohako, ny ranjoko no nikofokofoka nanala azy tanteraka. Ny tànany amin’io tsy miala amin’i balita fa manafosafo, manapotsipotsitra, maka ny hafanany toa mirehitra handoro.
Niharina aho sady nanala ilay akanjo ambony hany sisa teny amiko. Bokotra roa farany no novahako tamin’ilay lobaka teny aminy dia tazako iray manontolo ny toe-batan’i Tahiana. Ao amin’ilay itiavako azy mihitsy. Ny nonony tahaka ny voasary roa lehibe mipetraka tsara. Ny feny mbola voakolokolo sy mandimandina aok’izany. Ny hodiny fotsy, nefa malama sady zara raha misy pentina. Ny masony ihany no ahafantarana fa efa nahazoazo taona ity vehivavy manoloana ahy. Niodina aho nanoloana azy, nifanatrika dia nosarihako moramora izy hiarina sady nifamonjy nifanoroka izahay. Hetsika tsotra dia azony fa hanala ilay lobaka sisa fitafiana teny aminy no tanjoko. Niala iny, dia nifamihina mafy izahay, nifanoroka ihany koa. Ny sarin’i Malala no nataoko tao an-tsaiko. Tsy haritro mihitsy ilay tamin’ny farany niomehezany ahy taitra tamin’ilay «suçon» teo amin’ny nonony iny.
Nosokafako mora ny masoko, iny Tahiana niverina nitsilany teo ambony fandriana. Ningaiko ny feny dia nekeny koa hovelarina. Natoniko ny maojany dia niondrika aho nanaraka azy hitady ilay hafanan’ny vatany. Norohako ny nonony, ny lelako no nataoko hanafosafo ny lohanonony maranitra tsara. Tiany be ilay nataoko satria nangitikitika azy. Ny filahiako rahateo efa midona amin’ny azy, tsapako avy eo ny hafanany, efa miakatra avo, efa miandry fotsiny, fa naleoko nilalao sy nanaitaitra hatrany ilay bitim-pahasambarana tao aminy. Izy amin’io efa mando, ary ny filahiako aza efa mahare rano mameno azy ary mampitobo hatrany ny faniriana te-hitsofoka sahady.
Naleoko nanohy hatrany ilay orokoroka samihafa nanaitaitra ny vatako, sady izy rahateo namerina indray ilay tànany teo ami’ny fivaviany, no naka fy ny nataon’ny molotro. Nidina ihany aho, ary arakaraky ny fidinako tany ambany foitrany no nahatsapako hafanany miha-miakatra. Injay fa voamboloko ilay fofom-behivavy, fofona manaitra tampoka ny tsirim-panentan’ny lehilahy. Tiako ilay izy. Vao nahakasika faritra nisy volo ny saokako dia nijanona teo ny orokoroka nataoko; notadiaviko tamin’ny tànako ilany ilay zohy efa vonton-drano. Nosafoiko. Natsofoko tany ny fanondro iray. Injay fa nofenjain’ny hozatra tao anatiny tao iny ary tahaka ny notazominy tsy hiala, tsapako fa te-hanery mafy ny soroko ny fe efa mivelatra teo.
- "Hery a! avia fa miandry sisa aho, avia, fenoy fahasambarana aho fa mila an’izany."
Tsy ela dia natohoko indray teo amin’ny fivaviany ny ahy. Nakapokapoko mora teo, ny lohan’ny ahy no nasafosafoko aloha. Izy miha-mando tsy misy ohatr’izany. Ny tànako no nampiako hitondra ny filahiako hiditra tany anatin’ny haram-bato malemin’ny fitiavany. Tsapany tsara ny fidiran’ny ahy izay manosika hatrany amin’ny faran’ny fivaviany. Nanomboka nihetsika moramora izy nikaroka ahy koa. Nalefako mora ny mandroso mihemotra. Tiany ilay izy fa ny tànany aza misarika ahy hanatona azy, hanakaiky, hamihina mafy arak’izay azony atao. Nakipiny ny masony, onjam-pahafinaretana no nameno azy isaky ny nifandona ny maojanay roa.
Afaka kelikely tsy nahazo aina intsony aho tamin’ilay toerako teo, dia niala vetivety ary nitsilany tamin’ny lamosiko. Niaraka tamin’izay dia niharina koa izy ary naka fitoerana teo amboniko. Noraisiny ny filahiako dia natsangany tsara. Iny izy fa nampiditra an’i balita indray tany anatiny tany. Ny lanjany manontolo no mivesatra eo amboniko. Nanomboka nibahan-toerana tamiko ny fitiavana te hanome izay tadiaviny. Hitako ny nonony mihotsankotsana ary mahifinaritra erý ny nijery azy. Ny tànako no nasoloko ny tatiny hiarovana azy amin’ity fihetsiny miainga-ainga mikaroka ny fahasambarana tiako omena azy.
Ilay fihetsiny niakatra sy nidina teo dia nampiany indray ny ratsan-tànany nikitikitika mafy ny bokotry ny fitiavany efa mihenjana. Izy sady mimonimonim-pahasambarana no te-hikiakiaka mafy. Mankafý ilay fahafinaretana mitombo tsy an-kijanona ao anatiny. Ny fihetsiky ny tànany tsy nijanona fa afaka fotoana elaela dia nikiaka mafy izy sady nisy rano somary maisamaisatra nivoaka tamin’ny fivaviany. Ny filahiako nahatsapa ny hozany miketoketoka arahin’onja mavesatra. Nisento indray mandeha izy dia nampijanona ny fihetsiny rehetra. Tratrany ilay fahasambarana fara-tampony, ary tsy niala teo fa nijery ity rano nandena ireo volo. Nitsiky izy sady nisefosefo be, dia niondrika namonjy ny molotro. Tsy hitako intsony izay natao, izay aho vao tratran’izany vehivavy mamoaka rano izany rehefa nahatratra ny lanitra fahafito, asa tokoa, fa filàna tsy hay refesina, angamba efa nisalobona tany anatiny tany, ka vao nalàna ilay lamba narakotra azy, dia nivelatra tsy hay tohaina intsony.
Fotoana vitsy monja no nifanorohanay, izaho mbola tsy tonga, izy efa tsapako fa vizana tampoka tamin’ilay zava-nitranga teo. Dia niala tamin’izay izy sady naka toerana niforitra teo akaikiko. Ny tànany manafosafo ny hay indray, toa manamando tsara ilay filahiako notobasan’ny rano teo. Fahafinaretana be no tsapako avy any ambany any.
- "Avia Hery a! Avia fa omeko ilay tadiavinao amin’izay ianao”, sady nasainy nitsangana aho hiodina any aoriany.
- "Avia, ampidiro ato amin’izay ny anao, fenoy tsara aho fa tena te-hahalala ny maharary ahy. Sady ny ratsan-tànany maka ny hamandoana teny aminy no mivezivezy amin’ny lavaka faharoa nasehony ahy."
- "Vas-y, fais-moi mal!"
Vao mainka tsy tànako intsony ny filako, natohoko indray teo amin’ny fivaviany ny lohan’ny ahy hanamando tsara azy dia nakariko kely hanoloana ilay lavaka kely teo ankilany. Natsofoko mafy, tena teritery tsara, tsapako fa maharary azy ny nataoko nefa niditra tsimoramora ihany ilay izy, ny lambam-pandriana no namikirany mafy, ny tànany ilany manafosafo tsy an-kijanona ny fivaviany indray. Ny feo navoakan’ny vavany tsy nitsahatra fa naka fahafinaretana hafa kely izy tany anatiny tany. Toa ny fanaintainany no nataony ho fahasambarana. Izaho etsy mankafy sady mandefa mora. Soa fa mando tsara ny taovanay rehetra ka lasa nahafinaritra erý fidirana sy ny fivezivezen’ny filahiako tao anatiny tao. Nankafy tsy nisy ohatr’izany aho. Izy etsy, tsapako fa miharitra ny mafy hanome ahy ny tsara indrindra any aminy.
Isaky ny mampiditra aho dia toa i Malala hatrany no tiako hatao maharary toy izao, tiako hovaliana amin’ny maharary azy ny nataony ahy hatramin’izay!
Afaka fotoana vitsy dia reko mitambolona any anatiko any ny fahasambarako, iny efa ho tonga iny aho no navoakako tamin’ny fihetsika haingana ny filahiako ary nafafiko teny amin’ny lamosiny ny tsirin’aina rehetra tany amiko. Taitra izy ary toa izay rano nifafy avy any amiko izay no nahatonga ny fahasambarany faharoa. Naka aina tsara teo izahay aloha ary tsy nisy nifampiteny na nifampiresaka. Nalaiko ilay lobaka lava nanaovany teo dia namafàko ny lamosiny. Nanomboka nitaky taminay ny havizanana ka dia niara-nitsilany izahay roa, iny izy avy eo niondana teo amin’ny tratrako sady niteny hoe:
- "Hery a! tsy azonao ve ilay hoe omeo fahafahana aho?"
- "ie! tena tsy azoko fa inona no tianao holazaina?"
- "Rehefa miaraka aminao aho dia miala ho azy ilay fahadisoam-panantenana rehetra niainako hatramin’izay; toy ny hoe tsy hahita olona tahaka an’i L… intsony fa iny no idealy. Kanefa ianao no nanoro ahy ny làlana mahitsy tokony hizorako. Feno fitiavana ianao, feno fahatsaram-panahy, ary tsy tantinao izany hoe vehivavy mijaly izany. Tahaka ny hoe any aminao no misy ilay fahasambarana tadiavin’ny vehivavy. Dia ianao ve tsy mba lasa saina mihitsy ny amin’ny hoe nahoana i Alexia no miharitra ny mafy eo akaikinao? nefa ny ataon’i Malala aza ianao tsy mahatanty azy? Izao aho vao mahatsapa fa tsy misy izany olona tsy azo soloina izany eto an-tany, fa samy manana ny maha-tsara azy avokoa ny tsirairay. Anjarako, anjaran’ny vehivavy rehetra ny mandray izay tsara amin’ny lehilahy izay… Pauvre Alexia!" hoy ihany i Tahiana nanohy.
- "Andray," hoy aho, "ahoana no itenenanao izany?"
- "Eny e! tsy hitanao ve fa i Alexia ilay tsy manan-tsiny, izy ilay sangan’ny fitiavana, nefa miharitra ny mafy eo anilanao. Tsy afaka ny hanery ny fitiavanao aho, fa izao fotsiny no hevitro, ho feno fijaliana ny fiainanareo roa, raha mbola eo foana i Malala misaodisaody manodidina anareo. Koa manalavira azy, fantatro fa tena tinao i Alexia ary izy koa tena tia anao, kanefa toy ny aloka mety hanavandra anareo foana i Malala, izay tsy mety miala eo akaikinareo. Ary malama maina ny làlana izoranareo."
- "Hery a! tsy tokony ho fantatrao ve fa mety hiadana kokoa i Alexia raha miala amin’io fianakaviana io ianao? Diniho tsara ny ho avinao. Raiso ho anatra avy amiko izay. Sao dia tsy anjaranao i Alexia fa misisika fotsiny ianao hanaiky ny sarotra efa diavinao! Sao lahy, any ho any, tsy fantatrao akory, fa misy ilay efa voalahatra ho anao, mety ho tsara lavitra noho i Alexia."
Tsy nahateny aho satria misy mahamarina azy ihany ny tenin’i Tahiana. Inona tokoa moa, toa misoritra tsara fa hamotaka sy hanavandra ny fiainanay sy Alexia! Kanefa, tiako izy, tiako, ary ny anarany efa tsy voafafa intsony any anatin’ny foko any.
- "Tena tia azy ianao? andana ary izy tadiavo!", hoy indray i Tahiana nitsatsaingoka
- "Dia ahoana no ataoko?" hoy aho.
- "Henoy tsara ny fonao fa ho renao any anatinao any ny misy azy."
Dia iny i Tahiana nitsangana, ny vatany mitanjaka tanteraka, tsy misy hamenarana na dia kely akory aza sady nisarika ahy hiarina no toa falifaly aok’izany. Nosarihiny aho hanaraka azy tany anaty efitra fandroana. Nalefany ny rano dia nananika ny molotro izy ary nifanoroka ela indray izahay. Hafaliana ny hitako misoritra teny amin’ny tarehiny, tahaka ny hoe voavaha izay olany manontolo; ary lasa nanaraka ny rano nifatsitsiatra tamin’ny vatanay izay olany nianjady taminy hatramin'izay. Ary inoako fa tsapany tsara ny tsy fananako fitiavana azy mihitsy, fa nanome izay fahasambarana notadiaviny fotsiny no nataoko.
- "Efa amin’ny 7 ora maraina izao," hoy izy, "tsy aleonao ve miara-misakafo maraina amin’ireny salon de thé ireny isika rehefa avy eo!"
- "Dia ahoana izany ny akanjonao lena be ireto?… Sa aleo aho aloha hikaroka izay akanjon’i Mamanay taloha ao anaty larimoarany ao? sa tsy aleo isika no hiaraka hitady azy?"
Dia fotoana vitsy monja dia hitany izay akanjo tiany hanaovana, na dia somary nisy fofona lao kely aza. Nefa natanina andro maraina sy nakopaka ary nasiana ranomanitra, dia afaka nanaovany na dia nananosarotra ihany aza ny nanarona ireto nono be nahasarika ahy taminy.
- "Tandremo indray ary sao dia adinonao ato ny atin’akanjonao rehefa avy eo fa tsy te hahita tantara eto aho." Hoy aho sady lokilokin’ny hehy izahay roa namonjy ny efitranoko. Nojereny tsara tamin’ny fitsiriritana aho nisolo akanjo teo anatrehany.
Afaka antsasak’adiny dia iny izahay nivoaka ny trano dia nandray ny arabe hitady fiarakaretsaka. Tsy sahiny mihitsy ny nifampitositosy tamiko teny an-dàlana na tany amin’ny fisakafoanana, fa dia tahaka ireny mpianadahy zoky sy zandry ireny izahay. Ny fotoana nifampiresahana rahateo moa tery dia tery, ka ny hahazoana sakafo no masaka an-doha dia nisaraka samy namonjy ny toeram-piasàny.
Tonga ara-potoana tsara aho namonjy birao. Dia indro indray misy taratasy naterin’ny mpizara fa hirahin’ny orinasa hono aho hanatanteraka iraka mikasika ny fananan-tany any Mahajanga. Dia ahoana indray izany no hataoko? Fa nahoana aho no tsy avela mihitsy hitady ilay malalako? Toa lasa nivadika rahona mitady hanorana indray ilay lanitra mba mangamanga vao maraina nahafinaritra ahy teo.